Ndi Buddha - WRSP
MGBE BUDDHISM (圓 佛 敎)
1891: Park Chungbin, onye guzobere Won Buddhist, mụrụ.
1916: Park Chungbin, nke a maara dị ka Sot'aesan, bụ onye ọrụ ugbo na-agụghị akwụkwọ nke na-achọ ihe mbara igwe pụtara mgbe ọ nwere ahụmịhe mmụta na Eprel 28 nke ọ mechara chọpụta, mgbe ọ gụrụ ya Diamond Sutra, nyere ya otu nghọta banyere ọdịdị nke eziokwu nke Sakyamuni Buddha nwere ọtụtụ narị afọ gara aga Ya mere o kpebiri na Buddha bụ azịza nye nsogbu ụwa.
1918: Ihe oru ngo mbu nke ya na obere ndi na-eso uzo ya malitere bu iji weghachite site n'oké osimiri ụfọdụ ala n'ụsọ oké osimiri n'ihu obodo ya. Mgbe otu afọ gachara, ha nwetaghachị acres iri abụọ na ise.
1919: Mgbe arụchara ọrụ ahụ, Park na ndị na-eso ụzọ itoolu kwere nkwa ịmepụta iwu ime mmụọ ọhụrụ, nke ha kpọrọ "Society for the Study of the Buddhist Dharma." A na-ahụta nke a ụbọchị nke ntọala nke Buddhist Won dị ka usoro okpukpe (ụbọchị iri abụọ na isii na ọnwa nke asaa dịka kalenda ọnwa).
1920: Park na ndị na-eso ụzọ ya kwagara n'ụlọ nsọ Buddha dịpụrụ adịpụ, ebe ọ nọrọ afọ ise na-emepe echiche okpukpe ya. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ya na ndị mọnk Buddha gbanwere mkparịta ụka wee dee Chosŏn pulgyo hyŏksillon (Na mmeghari ohuru nke Buddha Buddha ) na Suyang y'n'gu yoron [ Mkpa Ndị Dị Mkpa na Mmụọ Nsọ na Eziokwu na Prinkpụrụ ] (E bipụtaghị ya ruo 1935 na 1927, n'otu n'otu).
1924: E hiwere isi ụlọ ọrụ maka otu ìgwè na Iri (nke a na-akpọzi Iksan), obodo dị na North Chŏlla.
1935: Taegakchŏn (Nnukwu lightlọ Nzukọ) mepere na Iri, na Ilwonsang (ihe ngosi nke gburugburu) edere ebe ahụ.
1935: E guzobere ụlọ nsọ mbụ na mpụga Korea na Osaka, Japan.
1943: Park Chungbin nwụrụ.
1943: Pulgyo chŏngjŏn (Correct Canon of Buddhism) bipụtara ọnwa abụọ ka Park nwụrụ na June 1 nke afọ ahụ.
1943: Mgbe Park nwụrụ, Chŏngsan (Song Kyu 1900-1962) nọchiri ya dị ka isi nke iwu ahụ.
1947: Aha ahụ bụ okpukpe Buddha nọchiri aha "Society for the Study of the Buddhist Dharma."
1953: Wonkwang College, bu onye bu University nke Wonkwang University, mepere uzo ya na Iri.
1960: Buddha a malitere ịsụgharị akụkụ Akwụkwọ Nsọ ya gaa n'asụsụ mba ọzọ iji kwadebe maka ime nkwusa na mba ofesi.
1961: Chŏngsan kwupụtara ụkpụrụ omume nke mmadụ atọ dị ka ụkpụrụ bụ isi nke Buddhist Won.
1962: E degharịrị akụkụ Akwụkwọ Nsọ, Wonbulgyo (Akwụkwọ Nsọ nke Won Buddhism). Akwụkwọ nsọ ọhụụ a gbakwunyere okwu nke onye guzobere ya na ihe odide mbụ nke onye guzobere ya.
1962: Chŏngsan nwụrụ ma Taesan nọchiri ya (Kim Tae-gŏ, 1914-1998).
1971: Wonkwang College ghọrọ Wonkwang University, mahadum zuru oke.
1971: E bipụtara nsụgharị Bekee zuru ezu nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ.
1972: Buddha a ma ama guzobere na US site na ịtọlite ​​ụlọ nsọ nke Korean-American na Los Angeles.
1973: Mahadum Wonkwang gbakwunyere kọleji ahụike na-elekwasị anya na ọgwụgwọ ọdịnala Korea.
1977: E mepere ụlọ ọgwụ na-agwọ ọrịa ọdịnala nke nwere njikọ na Mahadum WonKwang na Kwangju.
1982: Mahadum WonKwang mepere kọleji ọgwụ maka ọgwụ na ọgwụ.
1990: Yŏngsan College of Sŏn Studies mepere na Yŏngsan, South Chŏlla.
1994: Taesan si n'isi nke okpukpe Buddha ma dochie ya na Chwasan Yi Kwangjŏng (1936-).
2001: Won Institute of Graduate Studies guzobere na Glenside, Pennsylvania.
2006: Chwasan kwụsịrị ma Kyŏngsan Chŏng Ŭngch'ŏl (1940-) nọchiri ya dị ka Prime Dharma Master.
2016: Ihe karịrị mmadụ 50,000 rutere na Seoul World Cup Stadium iji mee ememme afọ 100 nke mmụta nke Sot'aesan.
Ndi Buddha nwere akara ubochi nke okpukpe ha adighi na nkwado iwu nke "ndi Buddha Buddha" na 1947 dika usoro okpukpe di iche na ndi ozo ma obu guzobe onye bu ya uzo "Society for the Study of the Buddhist Dharma" na 1919. Kama nke ahụ, ha kwupụtara Eprel 28, 1916, ụbọchị nke onye guzobere ha nwere nghọta, dịka mmalite nke Buddhist Won, nke ha ji nganga na-akpọsa okpukpe Buddha mana n'agbanyeghị okpukpe ọhụrụ.
Onye nchoputa a bu Park Chungbin (朴 重 彬, 1 891-1943), nke amara ya nke oma Sot'aesan (少 太 山). Ọ dịrị ndụ n'oge nke mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke akụ na ụba, nke ọha na eze na nke okpukperechi na mpaghara Korea. Na 1891, afọ a mụrụ ya n'ezinụlọ na-akpa nri n'otu obodo nta [Image dị n'aka nri] aha ya bụ Yŏngsan na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke Korea, narị afọ ise nke usoro ọchịchị Chosŏn na-eru na njedebe. Otu isi ihe kpatara na ọ na-eru na njedebe bụ na ogologo oge dịpụrụ adịpụ nke Korea na ọtụtụ ndị ọzọ nke ụwa na-abịaru na njedebe, ka ndị Japan na ndị ọdịda anyanwụ bidoro ịkwaga na mmiri ahụ iji jiri aghụghọ ahia dọta Korea n'ime ụwa nke oge a.
Mgbe Sot'aesan dị nanị afọ anọ, nnupụisi kasị ukwuu nke ndị isi ala na akụkọ ntolite Korea gbawara n'akụkụ Korea. O nwere ike ịbụ na azụmahịa nke mba ọzọ kpaliri, nnupụisi Tonghak (東 學), dị ka a maara, fọrọ nke nta ka ọ kwatuo gọọmentị. E meriri ya mana, na usoro ahụ, China, nke Korea kwadoro maka ọtụtụ akụkọ ihe mere eme edekọ, a manyere ya ịkwụsị mmekọrịta nwanne na nwanne ya na Korea ma hapụ Japan ka ọ nọchie ya. Ọ bụghị naanị na nke a bụ mgbanwe dị egwu na gburugburu ụwa Korea, ọ wetara mgbanwe dị ukwuu n'ime. Ọnụnọ nke ndị ahịa Japan na-eto eto malitere ihe ga-abụ usoro iri afọ nke ịkọwa akụ na ụba agrarian Korea. Thezọ mbata nke ndị mọnk Buddha si na Japan mekwara ka ọchịchị gọọmentị Confucian Chosŏn mebie Buddha. Maka ọtụtụ usoro ndị Chosŏn, kemgbe mmalite narị afọ nke iri na ise, amachibidoro ndị mọnk uwe mwụda ịbanye isi obodo ahụ. Iwu ahụ kwụsịrị na 1895, na-etinye Buddha n'okporo ụzọ dị ogologo maka ịkwanyere ugwu na peninsula.
Nnupụisi Tonghak nke 1894-1895 gosipụtara mgbanwe ọzọ dị mkpa na ọdịbendị okpukpe Korea. Nnupụisi ahụ si n'okpukpe okpukpe mbụ nke Korea, nke malitere na 1860. A maara ya n'oge ahụ dị ka "Eastern Learning" (Tonghak) (n'isi mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, ọ gbanwere aha ya ka ọ bụrụ Ọmụmụ (okpukpe nke ụzọ eluigwe 天道 敎), ọ bụghị Buddha ma ọ bụ Confucian. Ọ sitere na ahụmịhe okpukpe nke onye guzobere ya, Ch'oe Cheu (崔 濟 愚 1824-1864), onye ya na Chineke zutere na 1860. Chineke, bụ onye pụtara ìhè n'ihu ya n'okpuru aha Katọlik nke "Onyenwe nke Eluigwe" (天主) nakwa dị ka oge ochie Chinese aha nke Sangje (C. Shangdi 上帝), gwara ya na ụwa ochie na-achọ ịkwụsị ma ụwa ọhụrụ ka mma mepere emepe, na ebumnuche ya bụ ịkwadebe ụmụ mmadụ maka ụwa ọhụrụ ahụ. Ọ bụ ezie na Ch'oe kọrọ na ya na ya nwere mkparịta ụka Sangje, ọ kụzikwara na Chineke abụghị onye karịrị akarị kama na enwere ike ịchọta ya n'ime obi na n'uche mmadụ ọ bụla, ihe ịma aka dị egwu nye usoro ọchịchị ndị Confucian. Egburu Ch'oe na 1864 maka ikwusa ihe gọọmentị Confucian kpebiri na ọ bụ echiche ọhụrụ dị egwu mana echiche ya na-aga n'ihu na-enweta ndị na-eso ụzọ (Chung 2003: 3-18).
Afọ iri atọ mgbe ọnwụ Ch'oe gasịrị, ndị nnupụisi Tonghak (ọ bụghị ndị niile kwere na okpukpe Tonghak) jiri nkwa Ch'oe maka ụwa ka mma ịbịa dịka mkpu agha. Kaebyŏk (開闢 Nnukwu mgbanwe ahụ) kwesịrị iweta enweghị nhatanha nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụnụba ma ha chọrọ ime ngwa ọbịbịa ya. Mgbe mmeri nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị Tonghak (okpukpe ahụ nọgidere na-agbasa n'okpuru ala), onye okpukpe ọzọ na-adọrọ adọrọ pụtara ma kwuo ụzọ dị iche iche iji weta Nnukwu mgbanwe ahụ. Kang Ilsun (姜一淳 1871-1909), nke a maara nke ọma dịka Chŭngsan (甑 山), kụziri emume maka "nwughari nke eluigwe na ụwa" nke o kwuru bụ ụzọ kachasị dị irè iji mee ka ọbịbịa nke afọ ọhụrụ ahụ dị ngwa. Ọzọkwa, ọ kụziri na nsogbu nke oge ochie nile nwere ike ịbụ nke mmụọ ịsọ mpi. Mgbe onye ọ bụla na-achọ ibute onye ọ bụla ọzọ, mmadụ niile na-ata ahụhụ. Ọ bụghị naanị na nke a mere ka ndị mmadụ taa ahụhụ, nhụjuanya ahụ butere iwe, nke kpatara oke asọmpi wee wee nwekwuo ahụhụ. Kaepyŏk, o kwere nkwa, ga-eji ụwa nke imekọ ihe ọnụ dochie ụwa nke asọmpi na-aga n'ihu (Chung 2003: 18-26).
Ọ bụ ezie na Chŭngsan hapụrụ ụwa a na 1909 (ụmụazụ ya n'ime ọtụtụ iri afọ ndị sochirinụ kwenyere na ọ laghachiri n'eluigwe, ebe ọ chịrị tupu ọ banye n'ụwa), echiche ya, dị ka echiche nke Ch'oe Cheu gara n'ihu na-agbasa. Sot'aesan nwere mmetụta abụọ doro anya na ha abụọ. Agbanyeghị, ọ dabere na echiche ndị ahụ wee mepụta ọdịnala okpukpe dị iche. Dị ka ihe atụ, o weere echiche nke Kaepyŏk ma kọwakwa ya, na-ekwu na ọganihu sayensị na teknụzụ nke ụwa nke oge a na-ewetara nnukwu mgbanwe nke ihe mana mana ụmụ mmadụ anaghị edebe mmụọ. Ya mere, a chọkwara mgbanwe ime mmụọ, nke ahụ bụkwa ihe mgbaru ọsọ ọ chọrọ ime. Ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha sonyere ya n’ọrụ ahụ. O kwetakwara na nsogbu nke ụwa dị ugbu a na-eme ka iwe sie ike ma, kama n'ememe maka nwughari nke eluigwe na ụwa, ọ tụrụ aro kama iji iwe dochie onye ọ bụla na ihe niile na-eme ka ndụ anyị kwe omume (Choi 2011: 82- 85; Ọrịa 2003: 29).
Sot'aesan [Foto dị n'aka nri] chepụtara echiche okpukpe ọhụrụ ndị a mgbe ọ nwụsịrị na mmụta mgbe ọ dị afọ iri abụọ na ise. Ọ nọrọ afọ iri na ise tupu mmụta ya achọ nduzi ime mmụọ. N'oge ahụ, ọ zutere echiche nke obodo Tonghak na ụmụazụ Ch ofngsan, mana ha abụghị isi ya. Site na afọ iri rue mgbe ọ dị afọ iri na ise, o chere na chi ugwu nwere ike inye ya azịza ọ chọrọ. Kwa ubochi o rigoro n’elu ugwu di nso n’ulo ya ikpe ekpere chi ugwu ahu ma hapuru ya onyinye n’olile anya na oga agbadata izute ya ma kuziere ya ihe ichoro imata. Mgbe nke ahụ emeghị, ọ malitere ịchọ mmadụ nke ga-abụ ezigbo onye nkuzi ime mmụọ. Ajụjụ ahụ ewetaghịkwa nsonaazụ ọ na-achọ. N’elu ya, ọnwụ nna ya, onye nwụrụ na 1910, na obodo ya, nke ndị Japan weghaara n’otu afọ ahụ, mere ka ọ nwekwuo agụụ ịchọta ihe ngwọta maka nsogbu nke ndụ. Ọ tụgharịrị n'ime wee malite ịtụgharị uche n'onwe ya, na-enweghị nduzi ọ bụla site n'aka ndị mọnk Buddha ma ọ bụ nkwanye mmụọ ọ bụla. Ọ gbalịsiri ike na-atụgharị uche nke na ọ dara ọrịa. Otú ọ dị, mgbe afọ anọ gasịrị, n'April 28, 1916, o mechara nweta ihe ọmụma ọ na-achọ (Chung 2003: 33-38).
Sot’aesan na-akọ na ozugbo e mere ka ọ mara ihe, ọ pụrụ ịhụ na “ihe nile bụ otu ahụ́ na ọdịdị; dharmas nile sitere n’otu mgbọrọgwụ ”(lee peeji nke 105 nke Akwụkwọ Ozizi nke Buddha Buda). Ọ nwekwara ike ịhụ na ụdị ọdịdị a na-enweghị atụ anaghị ebili ma ọ bụ kwụsị, yana na ya na ụkpụrụ nke ụgwọ ọrụ karmic nwere njikọ. Nke a dị ezigbo Buddhist n'ụda mana Sot'aesan na-ekwu na ọ bịara ịghọta nke a n'onwe ya ma ọ maghị na Buddha kuziiri otu ihe ahụ ruo ọnwa ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ nsọ nke ọtụtụ okpukpe ndị ọzọ, gụnyere Onye Kraịst , Ihe odide Buddhist na Daoist, o mere ịgụ Diamond Sutra. Ọ bụ mgbe ahụ ka ọ ghọtara na Sakyamuni Buddha bụ onye amamihe kachasị ukwuu.
Ka ọ malitere isoro ndị ọzọ nọ n’obodo ya kerịta nghọta ọhụrụ ya, ọ malitere inweta ndị na-eso ụzọ, ndị na-elegara ya anya maka nduzi na ndụ ha. Otú ọ dị, na ihe ịrịba ama nke nduzi Won Buddhist ga-eme mgbe e mesịrị, kama ịchọta obodo okpukpe ozugbo, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha sonyere ya n'ọrụ bara uru nke akụ na ụba. Ọ haziri mgbalị iji weghachite dịka ala ugbo dị ihe dị ka hekta iri abụọ na ise nke ala mmiri nke oké osimiri kwuru n'ihu obodo ya. Ha rụchara ọrụ ahụ na Machị, 1919, mgbe otu afọ nke ịrụsi ọrụ ike gasịrị. Otú ọ dị, n'oge ahụ, a tụbara Korea n'ọgba aghara site na mgbasa ngwa ngwa site na Seoul n'ime ime obodo ngosipụta na-achọ ka Japan hapụ Korea ma nyeghachi ya nnwere onwe ya (Choi 2011: 27-31).
Kama iduga ndị na-eso ụzọ ya itinye aka na mgbochi ndị Japan ahụ, Sot'aetsan kpebiri kama oge ahụ enweela bido ilekwasị anya n'ihe omume ime mmụọ. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya kachasị nso na ọ dị ha mkpa ịga otu ugwu dị nso na mpaghara ahụ ugboro atọ kwa ọnwa (ọ kenyere nke ọ bụla ugwu dị iche) wee rịọ eluigwe na ụwa ka ha mee paradaịs nke ụwa ngwa ngwa. Mgbe ihe ọbụla gbanwere mgbe ọnwa ise nke ikpesi ekpere ike dị otú a gasịrị, ọ kpọkọtara ha ọzọ ma gwa ha na Eluigwe na ụwa agaghị amata otu ekpere ha si dị ọcha rue mgbe ha gosipụtara na ha dị njikere inye ndụ ha n'ihi ụwa ka mma maka mmadu niile. O nyeziri ha iwu ka ha tụkwasị mkpịsị aka aka ha na mpempe akwụkwọ na-acha ọcha na-akwado nkwa ha kwere ịchụ ndụ ha maka ọdịmma ka ukwuu. [Foto dị n'aka nri] Ọ gwaziri ha ka ha laghachi n'ugwu ha wee gbuo onwe ha dị ka ihe akaebe nke ezi obi ha. Ka ha lara ime nke a, ọ kpọghachiri ha wee kwuo na ha egosila ezi obi ha na enweghị ịchụ aja ọzọ dị mkpa. A gwara anyị ihe na-egosi na ha nwere obi eziokwu bụ na isi mkpịsị aka ha hapụrụ akara yiri mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ ahụ n'agbanyeghị na ha etinyeghị ink na mkpịsị aka ha. Ọrụ ebube a bụ ndị Buddhist Won na-akpọ "Nyocha Dharma" (Chung 2003: 44-47; Kwangsoo Park: 38-42).
N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, Sot'aesan hapụrụ obodo nta ya gaa n'ụlọ nsọ dịpụrụ adịpụ na ugwu dị anya ọtụtụ kilomita. N'ime afọ ise ọ nọrọ n'ụlọ nsọ ahụ, ọ malitere ide echiche ndị ahụ ghọrọ ụkpụrụ ntọala nke usoro okpukpe ọhụrụ ya. Ihe odide ndị a mere ka o doo anya na ọ naghị ekepụta ngalaba ọhụrụ nke okpukpe Buddha ọdịnala Korea mana kama ọ na-emepe ụzọ dị iche iche echiche na omume Buddhist. Ọ katọrọ Buddha dị ka a na-eme na Korea nke oge ya ma kwupụta ụzọ mgbasa ozi iji kọwaa isi nsogbu Buddha nke imeri nhụjuanya nke ndụ gụnyere (Kwangsoo Park 1997: 42-44).
Nkatọ ọ katọrọ ya nke mere na ọ bipụtaghị ya rue 1935. Isi arụmụka ya na C hosŏn pulgyo hyŏksillon (Essays on the Renovation of Buddhism) bụ na okpukpe Buddha ọdịnala aghọrọ na Korea ihe ọ bụla karịa ndị mọnk na-achọ nzọpụta nke ha na ebe obibi ndị mọnk ugwu ma ọ nweghị ihe ha ga-enye ndị mmadụ na-ata ahụhụ. O siri ọnwụ na Buddha ga-esi n'ugwu pụta ghọọ Buddhm nke ọtụtụ, ọ bụghị nke ole na ole. O kwuru ime nke a ka ọ bụrụ nke Korea. Nke ahụ pụtara na ihe ederede bụ isi ga-adị n'asụsụ Korean, yabụ ọha na eze nwere ike ịgụ ha, kama ịbụ na Chinese oge gboo. O kwukwara na ndị Buddha kwesịrị ịkwụsị inye ihe oyiyi ma kama itinye uche na ijere ndị mmadụ ozi, na-amata na ndị ahụ bụ ezigbo Buddha (Kwangsoo Park 1997: 292-302).
Dị ka ihe ọzọ, tinye n'ihu na Suyang y'n'gu yoron (Ihe ndị dị mkpa nke Mmụọ Nsọ na Nyocha na Eziokwu na )kpụrụ), ọ tụpụtara, nke mbụ, na ndị Buddha kwesịrị iburu n'uche ihe abụọ iji bụrụ onye kachasị mma ha nwere ike ịbụ ma weta abamuru kachasị mma nye ndị gbara ha gburugburu. Nke mbụ, ha kwesịrị ịzụlite mmụọ nke ekele maka okike, ndị nne na nna ha, obodo ha, na iwu maka ime ka ha nwee ike ibi ndụ ahụike na nchekwa. Nke abuo, ha kwesiri ikwe ka ndi nwoke na ndi nwanyi tukwasiri onwe ha obi, wepu ndi mara ihe na ndi nzuzu, wepu onwe ha na ikuziri ndi ozo ihe, ma kwanyere ndi na-etinye aka maka odi nma nke ndi mmadu ugwu.
Na mgbakwunye, ọ tụpụtakwara omume atọ dị mkpa maka ịmalite ikike ịme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ma kọwaa àgwà ndị dị mkpa maka omume ndị ahụ iji dị irè. Omume atọ ndị a dị mkpa bụ ịzụlite obi dị jụụ ma doo anya site na ntụgharị uche, ịmụ eziokwu na ụkpụrụ dị na ederede Buddhist Won, na nhọrọ echebara echiche na omume nwere nsonazụ karmic. O kwuru na omume atọ ahụ kwesịrị ịbụ ndị àgwà dị mma na-akwado. Ọ dị mkpa ka onye na-arụ ọrụ zụlite okwukwe, nke ọ pụtara site na ntụkwasị obi na ikike nke ya ịbụ ezigbo mmadụ. Obi ike ahụ ga-esonyere ịnụ ọkụ n'obi na-arụ ọrụ maka ebumnuche ahụ, mkpebi siri ike ịmụtakwu banyere ihe dị mkpa iji mezuo ebumnuche ahụ, yana ịrara onwe gị nye iru ebumnuche ahụ. N'otu oge ahụ, ọ siri ọnwụ, ndị na-eme ọrụ ga-ewepụ enweghị nkwenye, na-emeri obi abụọ ọ bụla na ha nwere ike ịbụ ezigbo mmadụ site na mbọ ha. Ha kwesiri iwepu anyaukwu, umengwụ, na nzuzu, omume ndi ga-egbochi ha ime ihe niile ha nwere ike ime iji meziwanye onwe ha ma, n'ime oge a, meziwanye ndu nke ndi gbara anyi gburugburu. Naanị mgbe ahụ ka ha nwere ike ịkọwa na ma echiche ma n'omume (Chung 2003: 48-49).
Nkwenye Sot'aesan na mkpa ọ dị ịzụlite ekele na-egosi nzaghachi ya na nkwupụta Chŭngsan na nhụjuanya mmadụ na-akpata iwe. Agbanyeghị, atụmatụ ya ndị ọzọ bụ ngosipụta nke echiche ya pụrụ iche na Buddha, na-agbanye ya na ndụ kwa ụbọchị nke mmadụ nkịtị karịa na ịdọ aka ná ntị nke ndị mọnk. Buddị Buddha ya dị nnọọ iche n'otú ndị Korea n'oge ahụ si chee echiche Buddha na omume na ọ naghị esonye na nke ọ bụla n'ime iwu Buddha ma ọ bụ Japanese dị na peninsula n'oge ahụ. Kama nke ahụ, na 1924. ọ kwupụtara na ya ahaziri "Society for the Study of the Buddhist Dharma" (佛法 硏 究 會) na, ịhapụ ugwu ya na-agbagha, guzobere isi ụlọ ọrụ maka ọha mmadụ na ala ubi nke Iksan, n'ebe ugwu Mpaghara Chŏlla (Chung 2003: 50-51).
Iksan bụ isi ụlọ ọrụ nke Buddha a ma ama, iwu nke si na Sot'aesan's Society for Study of Buddhist Dharma. ” Ọ bụ na Iksan, na 1935, na Sot'aesan na-edebanye aha gburugburu, nke ọ kpọrọ Ilwŏnsang (一 圓 相), dị ka akara nke Dharmakāya Buddha (法身 佛). [Foto dị n'aka nri] Ọ mara ọkwa na Ilwŏnsang, nke a kwụgidere n'elu mgbidi n'elu ebe ịchụàjà, kwesịrị ịbụ naanị ihe ya na ndị na-eso ụzọ ya ga-ele anya ime mmụọ ha. E wepụrụ ihe akpụrụ akpụ nke Buddha dị iche iche na Bodhisattvas dị na ụlọ arụsị ọdịnala na ụlọ nzukọ ndị Buddha na-eme Buddha. Ilwŏnsang dokwara ihe oyiyi Buddha n'ụlọ ndị na-eso ụzọ ya. Ọ ghọwo akara nke ejiri mara Buddhist Buddhist (ma mesịa nye ndị obodo Sot'aesan aha ahụ). Onye a ma ama, ya na enweghị ihe oyiyi Buddha, na-egosipụta Buddha dị iche na ụdị Buddha ndị ọzọ na Korea.
Iji kwado obodo ọhụrụ ya, ma gosipụta ntinye aka ya n'okpukpe Buddha nke bụ akụkụ nke ụwa kama ịhapụ ya dịka o kwenyere na okpukpe Buddha ghọrọ, ọ guzobere ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmahịa nke ndị otu okpukpe ya na-achịkwa. Iwulite na ọdịnala nke ịdị irè ọ setịpụrụ na mbụ mgbe o guzobere otu njikọ kredit ma weghachite mudflats maka ugbo, Sot'aesan na ndị na-eso ụzọ ya jikwa osikapa osikapa, mkpụrụ osisi peach na persimmon, na ụlọ ọkụkọ iji mepụta ngwaahịa maka ahịa. Ka oge na-aga, ha bidoro rụpụta na ire ọgwụ ọgwụ (nke ndị China).
Na 1943, mgbe ọ dị nanị afọ iri ise na abụọ, Sot'aesan nwụrụ. Mana iwu o guzobere gara n'ihu na-eto n'okpuru nduzi nke onye nọchiri ya bụ Song Kyu (宋 奎 1900-1962), otu n'ime ndị mbụ na-eso ụzọ Sot'aesan. Abụ Kyu, nke a maara nke ọma dị ka Chŏngsan (鼎 山), duziri ndị okpukpe site na ọgba aghara nke ọchịchị ndị Japan na nkewa Korea na north na ndịda, na Korea War nke sochiri. N'ime afọ iri abụọ ọ rụrụ ọrụ dị ka Prime Dharma Master, aha e nyere isi nke iwu ahụ, o nyere aka nke ukwuu itinye obodo ahụ na ntọala siri ike na ọ fọrọ nke nta ka a kpọọ ya onye nchoputa.
Onyinye mbu ya bu ihiwe oha obodo nke o duru dika ndi otu okpukpe di iche na ndi ozo. Nke mbụ, ọ gbanwere aha ya. Na 1947, "Society for the Study of the Buddhist Dharma" nwetara nkwado iwu dị ka Buddhist Won si n'aka ndị ọchịchị na-achị South Korea n'oge ahụ (ọ ka nọ n'okpuru ọrụ US na njedebe nke ndị Japan nyefere na 1945). N'otu oge ahụ Chŏngsan mere ihe iji bulie ọhụụ na ịkwanyere ugwu nke iwu ya site na iwu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ọchịchị gọọmentị Japan gbochiri ya ịwu.
Na Korea, n'ihi ihe nlereanya nke ndị ozi ala ọzọ Protestant si North America na njedebe nke narị afọ nke iri na itoolu na mmalite nke iri abụọ, òtù okpukpe dị iche iche nwere mmetụta nke ịbụ ndị a manyere ịmalite ụlọ akwụkwọ nke ha, gụnyere mahadum ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, iji hụ dị ka nke oge a ma na-enye onyinye maka ọha mmadụ buru ibu. Chŏngsan enweghị ego iji mepe mahadum na mbụ, yabụ ọ malitere na 1946 site na obere ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke akpọrọ Yuil Academy. Ka ọ na-erule afọ 1951, ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ agbakwunyela afọ abụọ maka nkuzi wee kpọọ onwe ya Wonkwang Junior College. Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, ọ ghọrọ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị afọ anọ zuru oke. Ọ gara n'ihu ịgbasa mgbe Ch afterngsan nwụrụ na 1962 ma ugbu a bụ mahadum zuru oke. A na-akwanyere Mahadum Wonkwang ugwu na South Korea taa, ọkachasị maka ụlọ akwụkwọ ahụike ya, ọkachasị ụlọ akwụkwọ ọdịnala ndị China.
Mahadum Wonkwang ghere oghe nye onye obula, obughi ndi kwere ekwe. N'ezie, imirikiti ụmụ akwụkwọ nọ na kọleji ya abụghị Ndi Buddha. Menmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị chọrọ ịghọ ndị ụkọchukwu Buda nwere ike ịmụ ihe na Ngalaba nke ọmụmụ Buddhist mana nke ahụ bụ otu n'ime ọtụtụ ngalaba gbasaa n'etiti kọleji iri na ise na ụlọ akwụkwọ asatọ gụsịrị akwụkwọ na kampos. Mụ akwụkwọ ndị na-ahọrọ ụlọ akwụkwọ a raara nye naanị ọmụmụ Buddha nwere ike ịdenye aha na Yŏngsan University of Sŏn (ntụgharị uche) Studies guzobere n'ebe ndịda, na nso saịtị ebe Sot'aesan nwetara mmụta mbụ ya. Wonlọ akwụkwọ Buddhist a ma ama maka ọzụzụ nke ndị ụkọchukwu mepere ebe ahụ na 1935, mana ọ mechibidoro n'ihi Agha Korea. Chŏngsan zubere imeghe ya mgbe agha ahụ gachara mana atụmatụ ya emezughị rue 1964, afọ abụọ mgbe ọ nwụsịrị.
Nzọụkwụ nke atọ Chŏngsan mere iji mee ka iche iche nke Buddhist bụ Buddha bụ mkpokọta na mbipụta nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke Buddha Buddha. E bipụtara akwụkwọ mbụ nke akwụkwọ Sot'aesan mgbe ọ nwụsịrị mana mbipụta na 1962, obere mgbe Chŏngsan n'onwe ya nwụsịrị, nke nchịkọta a doro anya nke ọ bụghị naanị akwụkwọ Sot'aesan kama okwu ya dị ka ndị na-eso ụzọ ya dekọrọ. ozizi nke nzukọ okpukpe a na-eto eto (Chung 2012: 13-15).
Onyinye ọzọ dị mkpa nke Chŏngsan nyere iji wusi njirimara, na ịkwanyere ùgwù, nke Buddha a ma ama bụ ịkọwapụta ụkpụrụ nke Sot'aesan banyere nnabata okpukpe na imekọ ihe ọnụ site na ịwepụta amụma nke ya nke ihe ọ kpọrọ "ụkpụrụ nke njirimara atọ." Okwu a na-ezo aka na nkwupụta ya na, nke mbụ, okpukpe niile, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịdị iche na ibe ha taa, nwere otu mmalite, nke bụ ọchịchọ ịkwalite ịdị n'otu na imekọ ihe ọnụ n'etiti ọha mmadụ. Nke abuo, o kwuputara na mmadu nile, ebe obula ha no n'uwa, bu site na otu isi ihe na ume (o na-ekwu maka ki / Q (氣). na mgbe ahụ na-aga aga, ihe niile n’eluigwe na ụwa) ya mere anyị niile bụ ndị otu ezinụlọ. Nke ahụ pụtara na agbụrụ niile dị nha anya na ekwesịghị ịkpa oke agbụrụ. Nke ato, ma lee anyi huru uzo doro anya nke ndi Buddha nke nakweere nke ime mmụọ na nke ndi mmadu, tinyere uwa nke ahia, o kwuputara na ndi oru nile kwesiri inwe otu ebumnuche kwesiri otuto, nke bu imeputa otutu ihe ndi mmadu choro, na ya mere ha kwesiri ijikọ aka karịa ịsọrịta mpi. Ethkpụrụ omume a nke njirimara atọ bụ isi ihe dị mkpa nke nkwenkwe Buddha na omume ya, na-akpali akpali ịbịaru okpukpe Buddha na obodo ndị ọzọ, mgbalị ya na-adọta ndị na-abụghị ndị Korea na iguzobe ụlọ arụsị na mba ofesi, na nkwado nke ụlọ ọrụ azụmahịa dịka akụkụ nke okpukpe ya ozi (Chung 2012: 44-46).
Mgbe Chŏngsan nwụrụ na 1972, onye ọzọ so n'ọgbọ mbụ nke ndị Buddhist Won (ọ ghọrọ onye Buddhist Won na 1929, mgbe ọ dị nanị afọ iri na ise) ghọrọ Prime Dharma Master. N'okpuru nduzi nduzi nke Kim Taegŏ (大擧, 1914-1998), nke amara nke ọma dị ka Taesan (大 山), iwu ahụ mere ka ọhụhụwanyewanye na mpaghara okpukpe Korea. Taesan rutere na 1995, na-eche na ịka nká mere ka o siere ya ike ịrụ ọrụ ya nke ọma, ma dochie ya na Yi Kwangjŏng (李廣 淨 1936-), nke ndị Buddhist Won maara dị ka Chwasan (左 山). Omenala nke ịhapụ nkwenye tupu esighị ike edobere na nke Taesan guzobere, Chwasan gbaghakwara mgbe ọ ka nwere ahụ ike. A gbanwere ya na 2006 site na isi ugbu a (2016) Kyŏngsan (耕 山) Chang Ŭngch'ŏl (張 應 哲 1940-).
Iwu Buda nke Buddhist ka pere mpe n'etiti narị afọ nke iri abụọ. Ọ lanarịrị Agha Korea, nke biri na 1953, mana ọ nwere naanị ụlọ nsọ iri asaa mgbe ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, na 1970, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ arụsị fọrọ nke nta ka ọ gbaghaa okpukpu atọ, na 190. Site na 1995 ọnụọgụgụ ahụ ejirila okpukpu abụọ karịa, wee ruo ụlọ nsọ 454 na Korea naanị gbakwunyere iri atọ na mba ofesi. Ọganihu na-adịbeghị anya nwayọ nwayọ mana, site na mmalite nke afọ nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ na otu, Buddhist Won kwuru na ọ gbakwunyela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ nsọ 100 ọzọ, maka ngụkọta nke 550 nke ndị ụkọchukwu 2,000 na-eje ozi.
Banyere oke nke obodo Buddhist a mara mma, iwu ahụ na-ekwu na ọ nwere ihe dịka otu nde ndị otu, mmụba dị ukwuu site na 284,195 ọ na-ekwu na 1960 mana ọ bụghị ihe niile dị iche na ọnụ ọgụgụ ọ kọọrọ gọọmentị South Korea na 1982. Na 1985, gọọmentị bidoro ịgụnye isonye n'okpukpe n'ajụjụ a na-ekesa maka ọnụ ọgụgụ gọọmentị kwa afọ iri. Ọnụ ọgụgụ ọ chịkọtara anaghị akwado ọnụọgụ nke iwu ahụ. Na 1985, ọnụ ọgụgụ ahụ hụrụ naanị ndị Korea 92,302 bụ ndị kpọrọ onwe ha ndị Buddha Buddhist. Ọnụ ọgụgụ ahụ achọtara karịa na 2005 mana, ọbụlagodi, gọọmentị hụrụ ihe na-erughị mmadụ 130,000 ndị kwuru na ha bụ ndị Buddhist Won. (N'oge a na-ede akwụkwọ a, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ gụrụ na 2015 maka okpukpe abịabeghị.) O nwere ike ịbụ na ọtụtụ ndị Buddhist Won na-enyocha "Buddhist" n'ụdị gọọmentị kama ịga n'ihu na peeji iji chọpụta "Won Buddhist," mana agbanyeghị nkwupụta nke 1,000,000 Won Buddhist kwesịrị iji oke obi abụọ. O nwere ike ịbụ na ọnụọgụ ahụ gụnyere onye ọ bụla chere na ya onwe ya bụ Buddhist Won, ọ bụrụgodi na ọ naghị agakarị ụlọ nsọ Buddha ọzọ, ọ nwekwara ike ịgụnye ndị ezinụlọ niile na-eme Won Buddhist, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị Korea ka na-ahụ okpukpe njirimara ezinụlọ karịa ịhọrọ onye ọ bụla.
Okpukpe Buddha amalitela na-aga n'ihu na ebumnuche ya nke ịghọ okpukpe zuru ụwa ọnụ kama ịbụ okpukpe maka ndị Korea naanị. Wonlọ nsọ Buddha mbụ nke Won na North America mepere na 1973. Thatlọ nsọ ahụ na-eje ozi ọtụtụ ndị Korea-America bi na ndịda California. Agbanyeghị, enwere ụlọ nsọ ugbu a n'ofe North America, gụnyere ụlọ nsọ dị na Manhattan nke ndị isi na-abụghị ndị Korea. A pụkwara ịchọta ụlọ arụsị Buddha dị na Japan, China, Australia, Germany, France, Brazil, South Africa, Moscow, Cambodia, na Nepal, na-achịkọta ụlọ nsọ Buddhist iri ise na ise na mpụga Korea. Ọzọkwa, na mpụga Philadelphia na ọwụwa anyanwụ US, enwere Won Institute of Graduate Studies nke na-enye mmemme MA a kwadoro na Won Buddhist Studies, Applied Meditation Studies, na Acupuncture Studies (nke ikpeazụ na-adọta aha Mahadum Wonkwang maka ọzụzụ ndị dọkịta nke ọgwụ ọdịnala. ). Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị Buddhist Won na-abụghị ndị Korea ka pere mpe, Buddhism a ma ama guzobere ọnụnọ nke esenidụt ma na-enwe ọganiihu ịgafe agbụrụ ya ma sonye n'okpukpe ụwa (Ngalaba nke International Affairs of Won Buddhist 2010: 85- 136; Adams 2009: 20-31).
Ọ bụ ezie na ọ na-etu ọnụ na ọ bụ okpukpe ọhụrụ, Buddhist Won, bụ isi ya, bụ Buddha. Enwere isi ihe atọ nke nkuzi ya nke gosipụtara ya dị ka Buddhist.
Nke mbu, obu akwukwo ihe omuma karia echiche. Dị ka ndị Buddhist Theravada na ndị Zen Buddhist (ma n'adịghị ka ndị Buddhist Dị Ọcha), ndị Buddha a na-elekwasị anya na mmụọ ha dị elu karịa ndị mmadụ. Ha anaghịkwa atụle ọbụna Buddha akụkọ ihe mere eme, Sākyamuni, chi. Kama nke ahụ, ha na-ahụ Sākyamuni dị ka ezigbo onye nkuzi na-egosi anyị na anyị niile nwere ikike n'ime onwe anyị iji merie adịghị ike na adịghị ike anyị ma nweta izu oke ime mmụọ site na mbọ anyị. Nke a na-elekwasị anya n'ime, na ntụkwasị obi nke onwe, yana enweghị nraranye nye chi ndị ọzọ, na-enye Buddhist Won akụkụ nke agba Buddhist.
Na Buddha nke abụọ Buddhist Won Buddhist chere, echiche anthropocentrism nke Buddhist Won apụtaghị na ndị Buddha Buddha kwenyere na ụmụ mmadụ bụ isi iyi nke ihe niile dị n'ụwa na ahụmịhe kwa ụbọchị. Kama nke ahụ, dị ka ndị ọkà ihe ọmụma Buddha na ọdịnala Buddha ndị ọzọ, ndị Buddhist a ma ama kwenyere na e nwere eziokwu na-adịghị agbanwe agbanwe na nke na-adịghị agbanwe agbanwe nke dị n'azụ, ọ bụkwa mmalite nke ụwa dị ịtụnanya, na ọdịdị dị mkpa nke ụmụ mmadụ abụghị ihe ọzọ karịa eziokwu ahụ kachasị . Ndị Buddha a ma ama na-akpọ eziokwu ahụ bụ "Ilwon (一 圓)," nke okirikiri (一 圓 相) gosipụtara ma kọwaa dị ka izu oke zuru oke na njikọta nke ihe niile (Chung 2003: 69-84; Kwangsoo Park 1997: 88-95).
Ilwon dika ihe bu eziokwu abughi ihe puru iche nye ndi Buddha. Ndị Buddha na-eche echiche ejirila gburugburu ruo ọtụtụ narị afọ iji gosi ma ihe niile ejikọtara na ihe ọ bụla na nke jikọtara ihe niile na ihe ọ bụla bụ nke enweghị isi na ya zuru oke. Otú ọ dị, ndị Buddhist a ma ama na-eme ka gburugburu ahụ mesie ike site na idebe ya, na naanị ya, dị ka ilekwasị anya nke mmụọ ha n'ụlọ arụsị ha na ebe ịchụàjà nke ụlọ ha.
N'ebe ọzọ na mgbọrọgwụ Buddha, Won Buddhist na-akọwakwa eziokwu dị ka Buddha Dharmakāya (法身 佛). Iji merie ndị Buddha Dharmakāya Buddha, “ahụ Buda,” apụtaghị ụdị ikike karịrị nke mmadụ. Kama nke ahụ, ọ na-ezo aka n'ọdịdị Buddha nke na-egosi ihe nile dị adị. Ọ bụ nke ahụ gosipụtara dịka ọtụtụ ihe na mbara igwe kamakwa ọ bụ isi mmalite a na-adịghị ahụ anya nke ọtụtụ ihe na ya mere nke jikọtara ha niile na ibe ha (Chung 1987).
N'asụsụ doro anya nke Sot'aesan, "Ihe niile dị n'eluigwe na ụwa tozuru oke n'otu afọ." (“Atụmanya,” Akwụkwọ Ozizi nke Buddha-Buddha, peeji nke. 451) Na okwu amamihe karia Won Buddhists na-ekwuputa na “nkwa maka eziokwu nke Irwonsang,” Ilwon “bu uzo nke omumu na onwu nke gabigara idi na adi na adi, nke mbu nke elu-igwe na uwa, ndi nne na nna, mmadu efu na ndị dị ndụ. Ọ nwere ike na-etolite ma nke na-adịgide adịgide ma nke na-adịgide adịgide. Ọ bụrụ na elere ya anya dị ka nke na-adịgide adịgide, ọ pụtawo n'ime ụwa na-enweghị ngwụcha nke na-adịgide adịgide na-anaghị anyụ anyụ, dịka ọ dị ma na-apụtaghị n'onwe ya. Ọ bụrụ na elere anya dị ka alaeze, ọ banyela n'ime ụwa na-enweghị njedebe… site na mgbanwe mgbanwe site na nguzobe, ihe e ji ebi ndụ, mmebi, na mbibi nke mahadum, ọmụmụ, nká, ọrịa, na ọnwụ nke ihe niile… ”(Akwụkwọ Ozizi nke Buddha Buda, peeji nke 22-23).
Ihe ngosi a site n'okwu nke ihe, Sot'aesan kwetara, enweghị ike ịkọwa ya n'ụzọ zuru ezu na okwu bụ ihe nkịtị na ọ ga - egosi na ọ gaghị enye ezigbo nduzi nduzi maka ndị Buddha. Iji nye ndị na-eso ụzọ ya ihe gbadoro anya maka mmụọ ha Mgbalị, Sot'aesan kwupụtara na Ilwon ga-anọchi anya n'ụlọ arụsị ha na ebe ịchụ aja n'ụlọ n'ụdị nke Ilwon, nke mere eji akpọ akara ngosi ha Ilwonsang, "akara nke Ilwon." [Foto dị n'aka nri] Mana gburugburu ahụ dị larịị, dị ka ọ dị ka ọ dị, ọ naghị agwa ndị Buddha mara ihe Ilwon pụtara maka ndụ ha kwa ụbọchị. A sị ka e kwuwe, Buddhist a ma ama, dị ka ndị Buddha n'ebe nile, na-echegbu onwe ha banyere omume, banyere ihe ha kwesịrị ime, karịa banyere ozizi, ihe ha kwesịrị ikwere na nkịtị.
Nchegbu ahụ maka omume bụ àgwà Buddha nke atọ nke ozizi Buddha a ma ama. Ndị isi okpukpe Buddha na-ekwukarị na omume ha karịa nkwenkwe ha. Ha ga ajụ onwe ha “kedụ ka omume gị si aga?” kama "okwukwe gị ọ ka siri ike?" Ọ bụ ezie na ike nke Iso inzọ Kraịst na South Korea emetụtawo ndị Buddha nke ukwuu iji zoo aka ugboro ugboro na nkwenkwe na nkuzi ha, o doro anya na ma ederede ha na ọrụ ha na ihe kacha ha mkpa bụ ihe omume nkuzi ha.
Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ nkuzi nke Won Buddhist, ihe ngosi otu peeji nke isi okpukpe Buddha, na-agwa
Ndị na-eso ụzọ Sot'aesan ihe ha kwesịrị ime dịka ha kwesiri ikwere. [Foto dị n'elu] Ilwonsang (gburugburu) nwere ike ịhụ na etiti elu nke ibe ahụ. N'okpuru ya, okwu ahụ bụ na Ilwon pụtara Buddha Dharmakāya, "isi mmalite nke ihe niile dị n'eluigwe na ala, akara akara nke ndị buddha na ndị amamihe niile, na ọdịdị mbụ nke ndị niile nwere mmụọ." Mana ozugbo n'aka ekpe nke nkọwa ihe ọmụma ahụ bụ nkọwa ọzọ: ihe Won Buddhist kpọrọ Fourfold Grace, na Korea Sa then. Saŭn na-ezo aka n'ụzọ dị iche iche Ilwon si pụta ìhè nye ụmụ mmadụ: dị ka nne na nna nyere anyị ndụ, dị ka eluigwe na ụwa nke na-enye anyị ikuku iku ume na mmiri ka anyị asụọ, dị ka mmadụ ibe anyị na-emere anyị ihe anyị na-agaghị emeli n'onwe anyị. , na dịka iwu, iwu na ụkpụrụ na-enye nkwụsi ike na nchekwa na ọha mmadụ. A gwara ndị Buddha mara na ụzọ iji gosipụta nkwenye ha, na ntinye, Ilwon / Dharmakāya Buddha, iji zụlite ekele n'ebe ndị mụrụ ha nọ, ọdịdị, ụmụ mmadụ ibe ha, na ụlọ ọrụ ọha mmadụ na-enye nduzi na nkwụsi ike.
Ndị Buddha a na-ekwusi ike na ha ekwenyeghị na chi anthropomorphic. Ọ bụ ya mere enweghị ihe oyiyi na ebe nsọ nke ụlọ arụsị Buddhist Won. Ma mgbe ha jiri okwu ahụ bụ “Saŭn,” ha na-agbakwunyekarị nkeji okwu bụ “nim,” nke bụ ngbakwunye nke ejiri n’asụsụ Korea wee nwee aha mmadụ ma ọ bụ aha iji kwanyere onye aha ya ma ọ bụ aha ya ùgwù ( "Sngga," Wŏnbulgyo chŏnsŏ 2002: 14-15). A naghị agbakwunye “Nim” ma e nwee aha ihe ndị na-adịghị ndụ ma ọ bụ echiche dị iche iche, ma ha na-etinye “nim” na Saŭn ma n'abụ ma n'abụ. (Na nsụgharị ahụ dị nsọ apụtaghị na nsụgharị Bekee nke Won Buddhist ederede, ebe ọ bụ na ọ nweghị obere okwu bekee.) Ha anaghị agbakwunye "nim" na okwu ahụ Ilwonsang ma ọ bụ na aha Dharmakāya Buddha, mana mgbe ụfọdụ ha na-abụ "Dharmakāya Buddha -Saŭnnim, ”na-eme ka okwukwe ha sie ike na Fourfold Grace abụghị ihe ọzọ Buddha Dharmakāya, nke onwe ya abụghị ihe ọzọ karịa Ilwon. Ndị Buddhist mara mma na-eche na ọ dị mkpa iji asụsụ anthropomorphic na-agwa Saŭn okwu (ha na-ekpegara Dharmakāya Buddha-Saŭnnim ekpere ka ọ nọgide na-enye ha ihe ha chọrọ) iji nyere ha aka ịzụlite mmụọ nke ekele n'ebe ndị ha natara na Anọ Atọ Grace.
Ma a na-agwakwa ndị Buddha na ọ dịghị ndị ọ bụla ha nwere ekele maka naanị ha. Kama nke ahụ, n'okpuru aka ekpe nke usoro ihe nkuzi ha, a na-agwa ha “ebe niile ihe onyonyo Buddha” na “iwu niile ịchụ aja Buddha.” Nke a bụ iwu karịa nkọwa. Ọ na-agwa ndị Buddha a ma ama na ife na ijere Buddha Dharmakāya ekwesighi ịnọ n'otu ebe ọ bụla, ọbụnadị ụlọ nsọ. Kama nke ahụ, ha kwesịrị iburu n'uche na ụwa niile gbara ha gburugburu, gụnyere ndị niile nọ n'ime ya, bụ ngosipụta nke Buddha Dharmakāya ma yabụ na ha kwesịrị ịkwanyere onye ọ bụla na ihe niile ùgwù ma mee omume na mpụga ụlọ nsọ nwere otu ezi obi na ezi obi. Ngosipụta na emume nsọ n’ime ụlọ nsọ ahụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ndị Buddha nwere nkwenye na Sot'aesan, onye guzobere iwu ha, "Buddha ọhụrụ maka ọgbọ ọhụrụ"
(Ukwe nke Buddha Buddha 2003: 188– ukwe 175, “Buddha ọhụrụ na ụwa ọhụrụ). Nke a apụtaghị na ọ bụ Chineke ma ọ bụ bụrụ anụ ahụ nke Sākyamuni. Ha anaghị ekpegara Sotana ekpere. Ha na-akwanyere eserese ya, dịka ha si akwanyere ihe osise nke ndị dike obodo na ndị nna nna ha. [Foto dị n'aka nri] Mana, dịka ha na-ewere Sākyamuni ka ọ bụrụ nnukwu onye nkuzi karịa chi, ha na-ele Sot'aesan anya dị ka onye nkuzi, onye nwere nghọta pụrụ iche mana agbanyeghị mmadụ. Ha kwenyekwara, dị ka ndị Buddha ndị ọzọ na-eme, na ụmụ mmadụ ndị ọzọ nwekwara ike, ma ọ bụrụ na ha enweta nghọta ziri ezi nke eziokwu kachasị, ma kpebisie ike ime ihe kwekọrọ na ihe ọmụma ahụ, ha onwe ha kwa, nwere ike ịghọ buddha. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya na "onye ghọtara eziokwu nke eluigwe na ala ma tinye ya n'ọrụ na isi akụkụ isii nke ụmụ mmadụ bụ, n'ezie, ọ bụ onye dị n'eluigwe, onye maara ihe, na buddha." (“Buddha,” Akwụkwọ Ozizi nke Buddha Buda, p. 124).
N'ezie, ndị Buddha a ma ama na ọ bụ mmadụ ole na ole na-aghọ Buddha n'otu ndụ. Agbanyeghị, n’adịghị ka ndị Buda Buda, ha ekwenyeghị n’eluigwe ma ọ bụ ọkụ mmụọ ma ha nwụọ. Kama nke ahụ, ha kwenyere na ndị mmadụ na-enweta ohere ọzọ (na ohere ọzọ, na nke ọzọ) iji bụrụ ndị mmụta zuru oke ma nwekwaa mmụọ. Ndị Buddha a ma ama na-ekwenye n'okpukpe Buddha dị ukwuu na karma na nlọghachi. Kama ịrịgo n'eluigwe ma ọ bụ ịrịdata na hel, ha kwenyere na anyị alaghachila ụwa ọzọ, na otu anyị si alaghachi na-ekpebi otu anyị siri bie ndụ anyị gara aga. Ọ bụ ya mere otu n'ime iwu ndị bụ isi na nkwenkwe okpukpe Buddha, nke pụtara n'ihu aka nri nke Ilwonsang na eserese nkuzi, "na-eme nhọrọ dị mma n'ọrụ."
Sot'aesan kụziri, dị ka ndị Buddha n'ihu ya mere, na ebe ọ bụ na ihe niile metụtara ihe ọ bụla, omume ọ bụla nwere nsonaazụ, ma na ndụ a ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Dị ka ihe atụ, ọ sịrị “ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike ọ gaghị ahụ gị ma ọ bụ nụ gị, akpọla onye ahụ asị ma ọ bụ kparịa ya. Ebe ọ bụ na a na-ekesa ike site n'eluigwe na ụwa, ọ bụ ezie na ị pụrụ ịkpọ mmadụ asị n'amaghị ama ma nwee ike iweda ya ala nanị otu ugboro, a na-ebufeworị ike ahụ ma kụọ mkpụrụ nke mmerụ ahụ. ” (“Ihe Na-akpata na Ihe Ọ Na-arụ,” Akwụkwọ Ozizi nke Buddha Buda, p. 256)
Ọ kụzikwaara ndị na-eso ụzọ ya na mgbe ụfọdụ, mgbe anyị mere omume ọjọọ na ndụ a, anyị nwere ike agaghị enweta nsonaazụ ọjọọ ozugbo. N'ọnọdụ ndị dị otú a, anyị ga-ahụ ha n'oge ọzọ. Okpukpe Buddha anaghị ekwu okwu banyere ụmụ mmadụ na-alọ ụwa dị ka ụdị ndụ dị ala. Kama, ọ na-ekwu maka nsogbu mmadụ na ndụ a n'ihi nsonazụ mmadụ na ndụ gara aga. “Onye na-akpasu mmadụ iwe site n’iche echiche ụgha ga-enwe obi mgbawa na ndụ ya ọzọ. Onye ọ bụla na-anụ iwe na-ekpughe na nzuzo na-ekpughere ihe nzuzo ndị ọzọ ga-enweta mmechuihu na mmechuihu na ndụ ya ọzọ site na ịmụ ya n'alụghị di. Onye na-ekpughe ihe nzuzo ndị ọzọ ngwa ngwa ma na-emenye ha ihere n’ihu ndị ọzọ ka ha wee bụrụ ndị ihere ga-eme, na ndụ ya na-abịanụ, nwere akara ma ọ bụ ọnya na-adịghị mma n’anya ya nke ga-egbochi ya ndụ ya niile. (“Ihe Na-akpata na Ihe Ọ Na-arụ,” Akwụkwọ Ozizi nke Buddha Buda, p. 261)
Okpukpe Buddha ndị a ma ama na ihe niile jikọtara na ihe ọ bụla ọzọ ebe ọ bụ na ihe niile sitere n'otu ụdị Buddha zuru ụwa ọnụ nke na-esite na transitoryphenomena niile, na anyị niile nwere ike ịghọ ndị buddha site na mbọ nke anyị ma ọ dịghị mkpa ịdabere na enyemaka sitere na ụdị mmụọ mee nke a, na anyị ga-ahụ maka ọdịnihu anyị na ndụ a ma emesịa bụ nkuzi ọ na-eso ndị Buddha ndị ọzọ. Gịnịzi mere okpukpe Buda ji akpọ onwe ya okpukpe ọhụrụ?
Nsonye nke Dharmakāya Buddha na Fourfold Grace dị iche na nke Buda Buddha. Ọ dịghị ọdịnala ndị ọzọ bụ isi nke Buddha nke jikọtara ọdịdị Buddha na mmekọrịta dị otú ahụ ụmụ mmadụ na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụ mmesi ike a na ndụ kwa ụbọchị, mgbe ụfọdụ a na-egosipụta na mantra “Buddhadharma bụ ndụ kwa ụbọchị. Ndụ kwa ụbọchị bụ Buddhadharma, ”nke na-egosi ọdịiche dị na Buddha a ma ama na ụzọ ndị ọzọ a na-esi ekpe okpukpe Buda ma nye ya njirimara ya dịka okpukpe ọhụrụ.
Ebe ọ bụ na Buddhist a na-ekwusi ike na ihe oyiyi Buddha dị ebe niile na omume niile nwere ike ịbụ onyinye Buddha, ọ ga-adị mfe iche na enweghị ọtụtụ ụlọ nzukọ ofufe na usoro a na-eme nke ọma na Buddha Buddha. Ma nke ahụ abụghị ikpe. Onye isi nke abụọ Dharma Master, Chŏngsan, bipụtara onye ndu na Won Buddhist ememe omenala na 1961 ma na-echekwa ya, ma na-emelite kwa oge, kemgbe ahụ. Na Na-eduzi na Nduzi na Ememe gụnyere ndụmọdụ banyere otu esi eme ihe ndị anyị na-eme kwa ụbọchị, gụnyere ndụmọdụ "ịsa ihu mmadụ na ịsacha ezé kwa ụbọchị" (peeji nke 2) na aro na "anyị ekwesịghị ikwu okwu ruo mgbe onye gị na ya na-akparịta ụka kwubiri okwu ya na ịghara ịchịkwa ihe niile mkparịta ụka (p. 12) yana ntuziaka maka ịme mmemme Buddha dị egwu dị ka olili
Uzo ato di na ntuziaka Buudist a meriri n'omume kwesiri. N'igosi mmetụta nke ọdịbendị Confucian siri ike bụ nke Won Buddhist si pụta, akụkụ kachasị ogologo metụtara omume karịa omume okpukpe. Mkparịta ụka banyere ụkpụrụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, dịka ọmụmaatụ, otu esi anabata ndị ọbịa n'ụlọ gị yana etu ị ga-esi mee mgbe ị bụ ọbịa onye ọzọ, otu esi esi mkparịta ụka gị na onye tọrọ gị na onye ị tọrọ, na otu esi eme ihe na tebụl oriri, were ihe dị ka ọkara nke akwụkwọ ahụ. A na-arara akụkụ ndị ọzọ nke akwụkwọ ahụ iji kọwaa usoro maka ememe okpukpe n'ụlọ, yana maka mmemme okpukpe ọha na eze.
Emume ezin’ulo gụnyere emume iji nye nwa amụrụ ọhụrụ aha ya na emume iji mee ka nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọ toro eto ghọọ okenye. Ọ na-agụnye ntuziaka maka emume alụmdi na nwunye, ihe na-adịghị na Buddha ọdịnala Korea, yana yana ntuziaka maka usoro ime emume ncheta ọmụmụ nke mmadụ isii. Ngalaba na emume ezinụlọ na-aga n'ihu yana ntuziaka maka olili ozu kwesịrị ekwesị, yana maka emume kwa ụbọchị nke asaa maka ụbọchị iri anọ na iteghete mgbe onye otu ezinụlọ nwụsịrị iji kpee ekpere na a ga-anabata onye ahụ nwụrụ anwụ na nirvana. Ememe ndị ahụ n'oge ụbọchị iri anọ na iteghete ahụ, nke ekwenyere na oge ole ndị nwụrụ anwụ ga-eche tupu ịlọ ụwa, ekwesịrị ịgụnye ịkpọ aha Amitābha Buddha (kwenyere na Buddhist Ala Dị Ọcha ka ọ na-achị paradaịs mana a hụrụ ya na Buda Buddha dika okwu nke Buddha mgbe echere ya dika ihe nenweghi oke na ndu) ya na igu akwukwo, na ukwe, akwukwo Buddha na ndi Buddha.
Na Confucianism, nke na-achịkwa ndụ ndị Korea site na nke iri na anọ ruo na narị afọ nke iri na itoolu, ịsọpụrụ ndị nna nna bụ ememe kachasị mkpa ezinụlọ. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Buddha a ma ama nwere emume nna ochie nke Confucian na mgbakwunye na emume Buddhist nke a na-eme ozugbo ọnwu. A na-eme emume ndị ahụ a na-eme na Confucius n'ụbọchị ncheta ọnwụ nke nne na nna, onye nkuzi, ma ọ bụ okenye. A na-agba ndị mmadụ nwụnahụrụ ume ka ha nọrọ n'ụlọ nsọ Buddhist a na-eme emume a ma nwee ike ịgbaso usoro ọdịnala nke ime nke a n'ụlọ.
Ọ bụ ezie na o doro anya na echiche Buddha a na-atụgharị uche nke ndụ bụ nke a ga-eji akara aka mara ya bụ Confucianism (ememe ụbọchị ọmụmụ nke iri isii, dịka ọmụmaatụ, na-egosipụta nkwanye ùgwù maka ndị okenye nke bụ akara ngosi nke Confucianism), Won Buddhist ememe dị iche na ememe ọdịnala Confucius. Enwere nkwenye siri ike n'ememe ezinụlọ Buddhist a na-eme ka ọ dị mfe ma na-eme ihe n'echeghị ya, nkwụsịtụ na ọdịnala Confucian nke mmadụ ji emefu na emume, yana etu esi eme ememe, ka a na-ahụkarị dị ka ngosipụta nke etu esi gụọ akwụkwọ nke ọma, ka esi kụzie okpukpe , onye na-akwado emume ahụ bụ.
Akụkụ nke atọ nke ụkpụrụ iwu na ụkpụrụ nduzi a na-ekwu banyere ihe ọ kpọrọ "Rites and Rituals of the Order," na okwu ndị ọzọ, yana mmemme okpukpe maka obodo Buddhist zuru oke. Akụkụ a na-amalite site na ntuziaka maka enshrining nke Ilwonsang n'ụlọ nsọ ma ọ bụ n'ụlọ. Ntuziaka ahụ kwuru "Ebe ọ bụ na ihe niile dị na mbara igwe bụ ngosipụta nke Buddha Dharmakāya, ọ dịghị mkpa idebe Il-Won-Sang iche iche. Otú ọ dị, ihe a kpọrọ mmadụ n'ozuzu chọrọ ngosipụta a na-ahụ anya nke ihe okwukwe, na-enweghị nke ọ na-esiri ha ike ịnọgide na-egosipụta ofufe ime mmụọ ma ghọta ụkpụrụ omume. ” (Na-eduzi na Nduzi na Ememe, peeji nke. 60). A gwara ndị Buddha ka ha kpọọ isiala n'ihu Ilwonsang, ma n'ụlọ arụsị ma n'ụlọ ha. (Ha na-ehulata na omenala Buddha nke ijikọ aka ha ọnụ n'ihu obi ha ma na-akpọ isi n'úkwù ha.)
Ndi Buddhist a ma ama na-ejide Dharma Services, nke a na-eme kwa ụtụtụ Sọnde, dịka ọrụ ofufe Ndị Kraịst. Ọzọkwa, ndị na-agafe agafe bụ ndị na-eleba anya n'ụlọ nsọ Buddha Buddhist a na-ahụkarị na Korea nwere ike ihie ụzọ ụlọ nsọ ahụ maka ụka ebe ha ga-ahụ pews maka ọgbakọ ahụ, okwu ihu ọha maka onye ozi iji kwusaa okwuchukwu, piano iji soro ọgbakọ ahụ mgbe ọ na-abịanye aka n’aha, na ebe ịchụàjà dị n’ihu. Agbanyeghị, ha ga-ahụ ngwa ngwa nke nnukwu okirikiri ahụ, Ilwonsang, n'elu ebe ịchụàjà ahụ, nke ahụ ga-emekwa ka ha mata na ha na-ele ụlọ nsọ Buddhist Won karịa ụlọ nzukọ Ndị Kraịst nke ofufe
Typicaldị ọrụ ụtụtụ Sọnde [Foto dị n'aka nri] na-amalite site na oge ntụgharị uche dị jụụ iji mee ka uche dị jụụ ma tinye uche. Nke ahụ Ekpere na-esochi, nke na-ezo aka na abụ abụ obodo nke ụfọdụ Buddhist chọrọ. Achọghị ekpere, na Won Buddhist, dị ka ịrịọ mmụọ dị ike karịrị nke mmadụ maka enyemaka kama kama ịhazigharị uche anyị ka anyị wee nwee ike ịbịakwute ọrụ Ilwon ma yabụ ga-enweta amara nke Ilwon na-enye ka anyị wee nwee ike igwu egwu oru anyi kwesiri ekwesi n’ime mmadu na eluigwe na ala. Iji maa atụ, otu ekpere a na-ekpekarị bụ Yŏngju (Abụ Mmụọ): “Ike mmụọ nke eluigwe na ụwa juputara n'uche m. Uche m dị ọcha na-emetụ ihe niile dị na mbara igwe aka. Eluigwe na ụwa na mụ abụrụ otu. M sonyeere Eluigwe na ụwa n'ịgbalị ịmepụta ezi omume. " Enwere ike ịmegharị abụ dị mkpirikpi ugboro iri abụọ na otu.
Ekpere n'ụdị a na-esokarị ọgbakọ na-abụ abụ Buddhist Won. (The Buddhist a ma ama) (Ukwe nke Won-Buddha 2003) nwere abụ dị ka "Abụ nke Dharmakāya Buddha," "Anọ ndị Anọ," "Abụ otuto na Sakyumuni Buddha," na "Daejongsa [Sot'aesan] bụ Buddha Mgbapụta anyị.") Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-agụ akwụkwọ site na akwukwo ndi Buddha mara nma, ukwe nke "Dharmas di nkpa nke omume ubochi" ( Akwụkwọ Ozizi nke Buddha-Buddha 2016: 56-57) ọzọ ukwe, okwuchukwu, na otu ukwe ọzọ. Ewezuga okwu nke obi ụtọ, ukwe, okwuchukwu, na ọgụgụ ọgụgụ akwụkwọ, ọrụ ụbọchị ụka Buddhist a ma ama nwere ike ịbụ ọrụ ofufe Ndị Kraịst. A haziri ya dị ka ọrụ ndị Protestant karịa ka ọdịnala ọdịnala Buddha.
A na-agbakwa ndị Buddha ume ịtụgharị uche, ma ọ bụ site na ọnọdụ ịnọ jụụ nke Buddhist Zen nke Japan na ndị isi okpukpe Buddha ndị Korea, ma ọ bụ site n'ịgụ egwu. Ntụgharị uche abụghị akụkụ nke ọrụ ofufe mgbe niile. Kama nke ahụ temple ga-emepe ụzọ ya n'isi ụtụtụ maka ndị chọrọ ịtụgharị uche. Nnukwu ụlọ arụsị nwere ike ịnwe ọnụ ụlọ dị iche, ewezuga ụlọ nzukọ ofufe nwere pews ya, nke ndị chọrọ ịtụgharị uche nwere ike ịnọdụ ala n'ụkwụ na cushions n'ala iji tụgharịa uche n'ụdị ọdịnala Buddhist.
Ndi Buddha na-atụgharị uche nwere ike ịdị ka isi Buddhist na-atụgharị uche mana Buddhist ha nwere usoro ha puru iche. Ebumnuche nke ntụgharị uche na ọdịnala Buddhist Won abụghị iji mebie uche ma mee ka uche dị jụụ ka echiche na mmetụta uche onwe onye ghara ichegbu ya. Ihe a gbadoro ụkwụ abụghị ọnọdụ obi anyị na-eme ma anyị jiri nwayọ na-atụgharị uche kama n'ịzụlite mmụọ dị jụụ na nke ga-eme ka anyị mata echiche na omume anyị ka anyị na-eme kwa ụbọchị. Ebumnuche bụ ihe Buddhist Won na-akọwa dị ka "Zen oge na enweghị ebe ọ bụla," na-echekwa ma lekwasị anya na ọrụ a na-arụ n'oge ọ bụla ebe ọ bụla na ebe ọ bụla ị na-eme.
Ọ bụ ezie na okpukpe Buddha na-amata uru nke ntụgharị uche site na ịkọgharị aha Buddha ọzọ, ọ bụkwa na-atụ aro ịnọ jụụ nke anyị lekwasịrị anya na iku ume anyị. [Foto dị n'aka nri] Nke a bụ ụzọ ntụgharị uche na-ejikọkarị na Daoism. Ntụgharị uche Daoist gụnyere ilekwasị anya na iku ume mmadụ mgbe ọ na-etinye uche na "tanjeon" nke mmadụ, ubi cinnabar a na-adịghị ahụ anya n'ime afọ, n'okpuru otubo, nke ndị Daoist hụrụ dị ka akụkụ ahụ na-anakọta ma na-ahazi ume ọkụ si n'èzí ka o wee nwee ike ịmị egwu ike maka ahụ anyị na uche anyị (Chwasan 1997). Ọzọkwa, okpukpe Buddha na-ekwenye n'echiche Daoist na ntụgharị uche kwesịrị ekwesị nke cinnabar ga-eme ka ike mmiri anyị n'ime ahụ anyị na-arịgo na ike ọkụ anyị na-agbadata. “Ka ume mmiri na-arịgo, a ga-eme ka echiche ndị a na-aghọ aghụghọ dajụọ. N'ihi ya, ahụ na uche mmadụ ga-adị jụụ na nkwekọrịta zuru oke, ma mmụọ na ume ga-enweta ume. Otú ọ dị, ọ bụrụ na e meghị ka echiche na-ezighị ezi dị jụụ n'uche mmadụ, ike na-ere ọkụ ga na-arị elu mgbe nile, na-ere ume mmiri dum n'ahụ ma na-ekpuchi ìhè nke mmụọ. ” (Akwụkwọ Ozizi nke Buddha Buda, peeji nke 66-67). Ndị Daoists kwenyere na ịgbanwere ọkụ ọkụ na mmiri na-agbada na mmiri ga-agbanwe usoro okike nke ịka nká ma duga anwụghị anwụ. Ndi Buddha nwere ebumnuche pere mpe. Ahụmahụ ha kụziiri ha na itinye uche ha na iku ume ha ga-enyere ha aka ịzụlite obi dị jụụ ma dị jụụ nke, maka ha, bụ ebumnuche kwesịrị ekwesị ịchụso site na ntụgharị uche.
Na mgbakwunye na ememme ezinụlọ, ọrụ Sunday, na ntụgharị uche, Won Buddhist nwere ememe ndị ọzọ ole na ole. Enwere ememe nnabata nke anabatara mmadụ n'ime obodo Buddhist Won. E nwekwara emume maka ịmata ọganihu ime mmụọ, nke ekwuputara na Buddha a ma ama na-aga n'ihu site na dharma. Mgbe mmadụ ghọrọ Buddhist Won, a na-enye ha aha Buddhist nkịtị, dị ka Ndị Kraịst na-akpọ aha Ndị Kraịst mgbe e mere ha baptizim. Otú ọ dị, ndị a na-ekpe ikpe na ha enweela ọganihu ime mmụọ dị ukwuu ma nyekwa oge maka oge ụfọdụ ndị Buddha a na-enye aha Buddha ọzọ. Maka ụmụ nwoke, aha ahụ dị nsọ gwụrụ "san," dị ka anyị hụrụ n'aha ndị isi Dharma Masters. Utu ke oro, ẹsiak enyịn̄ iban emi ẹtiede nte “t’awŏn”.
Ndị Buddha mara mma na-eme ememme ncheta ncheta nke Sot'aesan, ụbọchị ọmụmụ nke Sakyamuni, na Day of Dharma Authentication (na-echeta ọrụ ebube nke mkpịsị aka ọbara na ọrụ akara aka nke ịgbaso Dharma site n'aka ndị na-eso ụzọ mbụ nke Sot'aesan ) dị ka ezumike okpukpe dị mkpa.
Ndi Buddhist a ma ama na-eyi akwa uchu mgbe ha na-achi emume. Ha anaghị eji ejiji ka ndị mọnk Buddha. Kama nke ahụ, ha na-eyi akwa nwere nnukwu Ilwonsang n'obi ha. Kaosinadị, ụfọdụ emume ha ji eme ihe bụ ihe eketa site n'okpukpe Buda. Ha na eji nkpiri osisi di egwu (mokt'ak), nkpa osisi, na mgbịrịgba ọla iji debe usoro di iche-iche nke emume. Tụkwasị na nke a, Ndị Buddha a na-ejikarị yŏmjoo (Buddhist rosary) iji gụọ ọgụgụ ha mgbe ha na-abanye abụ dị nsọ.
N'ịkpọ oku maka okpukpe Buddha nke kwesịrị ekwesị maka oge a, Sot'aesan siri ọnwụ na a ga-emechi oghere dị n'etiti ndị mọnk nọ n'ebe obibi ndị mọnk ugwu na ndị nkịtị n'obodo nta, obodo nta, na obodo. Ọ kpọkwara oku ka ịkwụsị ịkpa oke megide ụmụ nwanyị, na-ekwusi ike na a ga-ahapụ ụmụ nwanyị otu ohere inweta agụmakwụkwọ na ọrụ ndị nwoke mere n'okpuru Confucianism. Okpukpe Buddha abịawo ogologo ụzọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ ahụ. Enwere ihe dị iche n'etiti ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị, ọ bụ ezie na ọdịiche ahụ adịchaghị oke na Buddhist Won dị ka ọ dị, ma ka dịkwa, na Buddha ọdịnala. Ọzọkwa, a naghị emeso ụmụ nwanyị otu ihe ahụ dị ka ụmụ nwoke na Won Buddhist, ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị na-enwe ike dị ukwuu n'ọchịchị ndị Buddhist Won karịa ụmụ nwanyị na-eme na Buddhist Korea.
Enweela ndị isi anọ nke iwu Buddhist Won kemgbe Sot'aesan. Ndi mmadu nile aburula ndi nwoke, obu ezie na ndi isi ochichi hoputara onye isi ndi Dharma Council nke mejuputara onu ogugu ndi nwoke na ndi nwanyi. Agbanyeghị, ugboro abụọ kemgbe a họpụtara ụmụ nwanyị 2003 onye isi nchịkwa nke iwu ahụ, naanị otu nzọụkwụ dị n'okpuru Prime Dharma Master. Ọzọkwa, ụmụ nwanyị ndị ụkọchukwu karịrị ndị ụkọchukwu karịrị ụmụ nwoke. N’afọ 2015, ndị isi nwaanyị karịrị otu puku na otu narị, ma ihe na-erughị narị ndị ụkọchukwu nọ. Nke a nwere ike ịgbanwe n'afọ ndị na - abịanụ kemgbe, n'afọ ndị a, ụmụnwoke karịa ụmụnwaanyị.
A na-akpọ ma ndị nwoke ma ndị nwanyị bụ ndị ụkọchukwu Buda Buddhakyomu, ”Nke pụtara“ ndị raara onwe ha nye ihe ndị a na-akụzi. ” Enweghi ihe di iche na aha ha, ma obu oru ha, n'etiti ndi nwoke na ndi nwanyi ndi isi. Agbanyeghị, otu nnukwu ọdịiche ka dị. Otutu nwoke kyomu lụrụ di na nwunye ma bikwa na ezi-na-ụlọ ha n’ebe ha na-eje ozi. Nwanyi kyomu, site na omenaala mana obughi site na iwu nke usoro, na aghaghi ibi ndu na ulo uka ha ma obu ndi ozo kyomu (Bokin Kim 2000: 156-71). (Ọtụtụ ndị Buddhist Buddhist kwenyere na ọrụ nke ịbụ nne ga-egbochi ọrụ ndị ụkọchukwu mana na ndị ụkọchukwu nwoke nwere ike ịdabere na ndị nwunye ha ilekọta ihe ezinụlọ anya.) Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ndị ụkọchukwu na ndị nwoke na ụmụ nwanyị na-eyi akwa Ilwonsang ahụ n'obi ha mgbe ha na-achịkwa emume, ka ha na-ebi kwa ụbọchị, ha na-eji ejiji dị iche iche. Nwoke kyomu Adịghị iche na onye ọchụnta ego Korea nkịtị, belụsọ na olu akwa na uwe elu ha nke yiri akwa olu Roman hụrụ na ndị ụkọchukwu Katọlik. Ha anaghị akpụ isi ha, n'adịghị ka ndị mọnk Buddha, ma ọ bụ na ha nwere ntutu isi. Mgbe ha na-eyighị uwe ọdịnala, ha na-eyi uwe elu ọcha na uwe ogologo ọkpa, mgbe ụfọdụ ha na-eji akwa kootu. Mụ nwanyị kyomu, n'aka nke ọzọ, nwere ọdịdị pụrụ iche. Ha bụ ntutu isi ha wụsiri ike n'azụ iji mepụta ụyọkọ nke yiri ụdị ntutu ọdịnala nke ụmụ nwanyị klaasị nọ na Korea ọdịnala. Uwe ha na-adị kwa ụbọchị bụ ụdị gbanwere nke hanbok, uwe ndị Korea. Otú ọ dị, ebe a hanbok pụrụ ịbụ nnọọ yi, nwanyi kyomu mbipute nwere oke oji na ọcha, uwe mwụda di oji na uwe elu nwanyị na-acha ọcha n’oge ọkọchị na-acha oji n’oge oyi.
Dị ka ọ dị na nnukwu nzukọ ọ bụla, Won Buddhist nwere ndị isi na-achịkwa, na-achịkwa ikike nzukọ Buddhist Won gburugburu ụwa site n'isi ụlọ ọrụ dị na Iksan, na mpaghara ugwu Chŏlla. Prime Dharma Master na onye isi nchịkwa na-arụ ọrụ n'isi ụlọ ọrụ dị na Iksan. Agbanyeghị, otu Kachasị Elu Dharma họpụtara ha, ma nwee oke ọrụ. A na - ekenye ike ha na ndị omebe iwu kachasị elu, Kọmitii Dharma Kasị Elu, nke ọ bụghị naanị nwere ọnụ ọgụgụ ndị nwoke na ndị nwanyị ma nweekwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị otu nọ, ọ bụ ezie na ndị ụkọchukwu karịrị ndị nkịtị na otu ahụ (Adams 2009: 15-16).
Ọ bụrụ na enwere ike ịhụ Kansụl Dharma Kasị Elu dị ka ụlọ elu nke ndị omebe iwu Buddhist Won, mgbe ahụ enwere ike ịhụ Central Council of Minister na Laity dị ka ụlọ ala. Ọ na-enye ebe ndị ụkọchukwu na ndị isi nke ndị otu Buddhist dị iche iche nwere ohere ịnabata ụfọdụ mkpebi dị mkpa nke metụtara usoro niile.
N'okpuru akụkụ ndị omebe iwu abụọ a, ọtụtụ ụlọ ọrụ nhazi, bụ ndị a họpụtara ijikwa ihe omume mba ụwa, agụmakwụkwọ, ihe gbasara ego na azụmaahịa, ọdịmma na ọrụ ọdịmma, yana ọdịbendị na mgbasa ozi. N’ụwa nile, e kewara ụlọ arụsị ndị Buddha na mpaghara iri na ise, dị ka sistemụ Katọlik nke diọcese na-elekọta ndị ngwuro ngagharị. Na mgbakwunye na ijikwa ihe omume nke ụlọ arụsị 550 dị na Korea na ihe karịrị iri ise na mba ọzọ, iwu Buddhist Won nwere usoro mmụta agụmakwụkwọ buru ibu, sitere na ụlọ akwụkwọ ọta akara na mahadum zuru oke. O nwekwara ụlọ ọrụ ahụike dị ọtụtụ, nke mejupụtara n'ụlọ ọgwụ maka ọgwụ ndị China na ụlọ ọgwụ maka biomedicine ọgbara ọhụrụ. Na mgbakwunye, ọ na-agba ọtụtụ ebe ọdịmma mmadụ na Korea. Iji kwado ọrụ ebere ndị a, Buddhist a ma ama na-arụ ọrụ ugbo (na-elekwasị anya na ọrụ ubi), ụlọ ọrụ ọgwụ, na njikọ otuto.
Okpukpe Buddha abụghị okpukpe Buddha na-agọnahụ ụwa. Nkwupụta ahụ kacha mara Sot'aesan, "site na nnukwu mmeghe nke okwu, ka e nwee nnukwu oghere mmụọ" (Akwụkwọ Ozizi nke Buddha-Buddha 2016: xix) na egosi na ya, ya na ndi n’eso ya, nabata uwa di itunanya na otutu mgbanwe ndi n’agha n’iru taa n’abughi dika ihe ewepuru ma kama ka ihe ha n’eme. Sot'aesan ghọtara na ụwa gbara ya gburugburu na-agbanwe ngwa ngwa akụ na ụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, teknụzụ, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ọtụtụ n'ime mgbanwe ndị ahụ ka mma. Ebumnuche ya abụghị ịgbanarị mgbanwe ndị ahụ kama ịnabata ha mgbe ọ na-akwalite ụzọ ọhụrụ nke ime mmụọ nke na-enye ndị mmadụ ohere idebe ndụ ha n'ime n'ime otu mgbanwe ahụ n'etiti mgbanwe ndị ahụ niile. Ọ bụ ya mere ndị ụkọchukwu Buda ji nọrọ n'etiti ndị obodo kama biri n'ebe obibi ndị mọnk dịpụrụ adịpụ. Ọ bụ ya mere Won Buddhist bụ nke mbụ nzukọ Buddha nke Korea iji soro ọha na eze na-emekọrịta ihe site na ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, na ọbụna azụmaahịa. Ọ bụ ya mere na ọ bụ okpukpe ọhụrụ Korea mbụ nwere ụlọ ọrụ redio na TV nke ya na izipu ndị ụkọchukwu ka ha jeere ndị na-efe ofufe na ndị agha Korea agha.
Otú ọ dị, nke ahụ apụtaghị na Buddha a na-atụghị anya ya na-enwe nsogbu ịgagharị ụwa nke oge a. Ọnụ ọgụgụ ndị ozi alala n'ezie n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, n'agbanyeghị na ọnụọgụ ndị na-efe ofufe arị elu. Na 2002 Won Buddhist kọọrọ gọọmentị na o nwere ndị ụkọchukwu 2,455. Ka ọ na-erule 2008 ọnụ ọgụgụ ahụ agbadaala ruo 1,886. O bilitere ọzọ na 1,979 site na 2011 mana ọ ka dị n'okpuru 2,000 na 2015. Ọzọkwa, dị ka ọnụọgụ nke isi ụlọ ọrụ Buddhist wetara, ọnụ ọgụgụ ndị otu ya etobeghị ngwa ngwa dịka ndị asọmpi okpukpe ya n'ime iri afọ ole na ole gara aga. Ndi Buddha a ma ama nwere ihe kariri 1,000,000 ndi na-agbaso na 1980s. Afọ abụọ na ọkara ka e mesịrị, ọ na-ekwu na ndị otu ya arịgoro n'ihe dịka 1,700,000, nke bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ, ọ bụ ezie na okpukpe Buddha, Protestant na Roman Katọlik niile kwuru na ha enwetala ọtụtụ ndị otu n'otu oge ahụ. Nchịkọta gọọmentị na 2005 hụrụ ndị Buddhist 10,700,000, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3,000,000 karịa 8,600,000 ọ hụrụ na 1985. Ndị Protestant 6,500,000 ọnụ ọgụgụ ahụ achọtara na 1985 mụbara karịa 8,600,000 na 2005. Ndị Katọlik nwere naanị ndị otu nde 1,800,000 na 1985 mana site na 2005 nwere ihe karịrị 5,000,000. N'ime okpukperechi atọ ndị bụ isi na Korea, naanị ụka Katọlik na-eto ngwa ngwa karịa nzọ Buddhist Won na-eto. Agbanyeghị, ha ka nọkwa n'okpukpe ndị ọzọ n'ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ekwenye na ha.
Nchịkọta gọọmentị achọpụtala na ndị Buddhist Buddha dị ole na ole na-ekwu na 1,700,000 Won Buddhist na-ekwu. Onu ogugu nke 2005 nke ndi mmadu 104,574 bu ndi choputara dika ndi Buddha bu ndi onu ogugu ndi mmadu onu ogugu. Nke ahụ ji pasent iri abụọ karịa ọnụ ọgụgụ 86,832 a chọtara na 1995, nke pere mpe karịa 92,302 nke gọọmentị achọtara na ọnụ ọgụgụ 1985. Ọ dịbeghị mgbe gọọmentị chọpụtara na Won Buddhist bụ otu pasent nke ndị South Korea bi. N'aka nke ọzọ, ihe ruru pesenti iri abụọ na atọ nke ndị Korea kpọrọ onwe ha ndị Buddha (nke, n'ọtụtụ ikpe, pụtara ndị Buddha kachasị, ọ bụghị Buddhist Won), ihe ruru pasent iri na itoolu na-akpọ onwe ha ndị Protestant na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent iri na otu na-ekwu na ha bụ ndị Katọlik.
Ihe obula bu onu ogugu ime Buddha Buddhist, o yiri ka o tobeghi dika o siri kwuo. Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ arụsị na Korea amụbaala nwayọ n'ime afọ iri atọ gara aga, site na 436 na 1990 ruo 624 na 2016. N'aka nke ọzọ, okpukpe Buda kachasị na-akọ na ọ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ezumezu 27,000 na 2011 ma e jiri ya tụnyere ihe na-erughị 10,000 na 1990. The ọnụ ọgụgụ nke ụka Protestant toro na obere ije ije mana agbanyeghị ihe karịrị okpukpu abụọ, site na ihe dịka 35,000 na 1990 ruo ihe ruru 80,000 taa. Ọbụna ụka Katọlik nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụka 1,700 taa ma e jiri ya tụnyere 844 na 1990. N'ime okpukpe okpukpe Korea anọ ndị a, ọ bụ naanị okpukpe Buddha adaala opekata mpe ọnụọgụ abụọ nke ọnụ ọgụgụ ụlọ nzukọ ya (Han'guk na chonggyo hyŏnhwang 2012).
Gịnị mere ọnụ ọgụgụ ndị ụkọchukwu ji kwụsị? Dika Korea meworo ka ha di ugbua, ndi oru ohuru emeghewo nye ndi nwoke na ndi nwanyi, nke a putara na ndi n’abia ochichi na achota oru ozo nke n’eme ka ego ba uba ma ghara icho oge na ume ha. N'ezie, mmụba nwayọ nke ọnụ ọgụgụ ndị na-eme Won Buddhist nwekwara ike bụrụ isi ihe na ịrị elu nwayọ nwayọ na ọnụ ọgụgụ ndị ụkọchukwu dị njikere ijere ha ozi. Ma nke ahụ na-ewelite ajụjụ ọzọ: gịnị kpatara Won Buddhist n'onwe ya etoliteghi ọsọ ọsọ n'okpukpe Buddha na Iso Christianityzọ Kraịst?
Nsogbu kachasị na-eche Buddha Iche Iche bụ na ọ kwụsịrị ịpụta akara pụrụ iche. Ọtụtụ ndị Korea nwere ike inwe mgbagwoju anya banyere ihe Buda Buddha bu n'ihi na o na-akpo onwe ya Buddha ma na-aru oru ya kwa izu n'ime ulo ndi yiri ulo uka karia ulo uka ndi ozo, ebe ulo nzuko ya nwere nani okirikiri n'azu ebe ozo karia ihe oyiyi Buddha ato ma obu ise nke a na-ahuta ebe ahu. n'ime ụlọ nsọ ọdịnala Buddha. [Foto dị n'aka nri] Ọzọkwa, ukwe ha, ewezuga egwu Buddhist ha, dị ka abụ ndị Kraịst. Ndị chọrọ nkasi obi nke okpukpe ọdịnala Korea na-ahọrọkarị ịga ụlọ nsọ nke yiri ka ọ bụ ọdịnala. Ndị na-enwe mmasị n’ọdịdị nke oge a nke ụka Kristian na-ahọrọkarị ịga ụka. Okpukpe Buddha enwebeghị ike ịkwado onwe ya dị ka ihe ọzọ nke atọ n'anya ọtụtụ ndị Korea. Na nke ọzọ ka ọ na-eto eto n'ahịa asọmpi, gụnyere ahịa okpukpe, ọ dị mkpa ịnweta njirimara doro anya nke na-eme ka ị dị iche na ndị asọmpi nwere ike. Okpukpe Buddha enwebeghị ike ime nke ahụ (Choi 2011: 153-55).
Na mgbakwunye, ọtụtụ uto nke Iso Christianityzọ Kraịst n'ime iri afọ ole na ole gara aga na Korea bụ n'ihi mgbasa nke ozioma ọganihu. Chọọchị ndị kwere ndị kwere ekwe nkwa na a ga-akwụ ha ụgwọ maka okwukwe ha site na ego dị elu na ezinụlọ nwere ahụike bụ ndị butere ụzọ na uto ahụ. Okpukpe Buddha gbalịrị ịnọgide na site n'ịkpọ ndị mmadụ ka ha bata n'ụlọ nsọ ha ikpe ekpere maka ụgwọ ọrụ ụwa dị ka ịnabata nwa ha n'otu mahadum kachasị asọmpi Korea. Buddha a naghị eme nke ahụ. Ọ bụ ezie na ọ na-akụzi na ndụ ibi ndụ dị ka Ilwon ga-eme ka ndị na-efe ofufe nwee obi ụtọ na ọbụna rụpụta ihe karị, ebe ọ bụ na ha ga-eme ihe kwekọrọ na ụwa gbara ha gburugburu kama ịgafe usoro ndụ nke ndụ, ọ pụtaghị ihe ndị akọwapụtara kwụghachi ụgwọ ka ọtụtụ ụka Kraist na-akwụ. N'ihi ya, Won Buddhist adighi adọta ọtụtụ mmadụ n'ụlọ arụsị ya dị ka ụka ụka dị mma na-eme n'ime pews ha.
E nwekwara nsogbu ndị ọzọ. Asọmpi ahụ etoola karịa. Ruo ọtụtụ iri afọ, Buddha Buddha bụ nanị ụdị nke okpukpe Buddha nke oge a. Nke ahụ gbanwere na nkeji iri na ise ikpeazụ nke narị afọ nke iri abụọ. Ọ bụ ezie na a ka nwere ọtụtụ ebe obibi ndị mọnk ọdịnala na ndagwurugwu ndị dị n'ime ime, ụlọ arụsị ọhụrụ emeghewokwa n'obodo ndị mepere emepe. Temlọ arụsị ndị a nke obodo mepere emepe na-enye ọrụ ụbọchị Sọnde, nke na-esonye karịa mmemme ọdịnala. Ọgbakọ ha na-abụ ukwe, tinyere piano, abụ ndị a dịkwa n'asụsụ Korean karịa ịbụ abụ n'abụ n'ụdị ọdịnala Korea nke Sanskrit. Ndị isi mọnk na-enyezi ndị nkịtị na-arụ ọrụ okwuchukwu banyere nkuzi Buddhist kama ịlaghachi n'ọgbakọ ma kpee ekpere n'onwe ha n'ihu ebe ịchụàjà. Temlọ arụsị ndị dị n'obodo ndị ahụ na-enyekwa nkuzi na ozizi Buddha na omume maka ndị nkịtị. Okpukpe Buddha nwere ike ịbụ obodo Buddha mbụ nke Korea iji dozie ọdịiche dị n'etiti ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị ma Buddha bụ isi na-anwa ijide ya.
Igosiputa ighota na ndi mmadu n’atu anya okpukpere chi nke nakpo onwe ya Buddha ime ka ndi Buddha, na nso nso a, ndi Buddha a na-achoputa ihu ndi Buddha. Nchịkọta Bekee nke 2016 nke Akwụkwọ Nsọ Buddha, The Akwụkwọ Ozizi nke Buddha Buda, gụnyere ụfọdụ sutra Buddha mara nke ọma na nke mbụ ya, ọ bụ ezie na ndị Buddhist Won na-abụ abụ Sutra na Diamond Sutra ruo ọtụtụ afọ na akwụkwọ Buddha ndị bụ isi etinyewo na nsụgharị nke asụsụ Korea maka oge ụfọdụ. N'etiti ederede Buddha ndị a bụ mkpụmkpụ amaokwu dị iche iche iji soro foto iri a na-azụ anụ Ox na-achọta n'ọtụtụ ụlọ nsọ ọdịnala ọ bụ ezie na ahụghị foto ndị ahụ n'ụlọ nzukọ ndị Buddha na-efe ofufe (Akwụkwọ Ozizi nke Buddha-Buddha 2016: 881-1003).
Ebe ọ bụ na ndị maara Buddha nke ọwụwa anyanwụ Asia na-atụ anya ka ndị Buddha tụgharịa uche, ụfọdụ ụlọ nsọ Buddhist ndị Won dochiela pews na ọdụm dị n'ala ebe ọ bụ na a hụrụ nke ahụ ka ọ kacha mma maka ịnọ ọdụ. Enwetara m otu ụlọ nsọ Buddha Won nke dị nso na etiti Seoul nke mere ka pipụ ahụ gaa n'akụkụ nke nnukwu ụlọ nzukọ ofufe ma tinyezie ọdụm n'etiti ụlọ ahụ. Wonlọ arụsị Buddhist a wuru na nso nso a na mpaghara Kangnam nke dị na ndịda Seoul nwere naanị pews na nnukwu ụlọ nzukọ ọ na-eji maka ọrụ Sọnde mana enwekwara obere ụlọ nwere ọdụ na ala maka ntụgharị uche. Ọtụtụ ụlọ arụsị Buddha na-enye oge ntụgharị uche ụtụtụ, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị na-abịa n'ụlọ nsọ iji nọrọ jụụ dị obere karịa ọnụọgụ ndị na-abịa na Sọnde maka ọrụ ndị ọzọ.
Ihe mgbochi ozo nwere ike ime ka Buddhist Won na-eto ngwa ngwa dika o choro, karia na Korea, bu na, n'agbanyeghi na obu Buddhist nke mepere emepe, nke nwere ulo akwukwo di iche iche na obodo di iche iche karia ndagwurugwu ugwu, a ka na-ahuta ya mpaghara. Ọ malitere n'ime ime obodo ma na-edebe isi ụlọ ọrụ ya, na mahadum ya, na obere obodo dị anya site na nnukwu obodo mepere emepe dịka Seoul, Pusan, na Daegu. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị otu nọ nso n'isi ụlọ ọrụ ya, na mpaghara dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke Korea peninsula. Ndị Korea nke oge a na-achọpụta ọgbara ọhụrụ na nnukwu obodo dịka Seoul. Ọtụtụ ụlọ nsọ Buddhist Won na Seoul emeghị ka ọ ghara imebi ihe oyiyi ọtụtụ ndị Buddha na-abụghị ndị Won nwere na Buddha a bụ maka ndị bi na-abụghị obodo Seoul nke oge a.
Ewezuga ịnwa ikpebi akụkụ nke omume Buddha ndị ọ chọrọ imesi ike, ntụgharị uche ọdịnala ọdịnala ma ọ bụ ọrụ ofufe nke oge a, na-anwa imeri ihe oyiyi ya enwetara site na mpaghara ime obodo ya, na ịnwa ịmepụta njirimara pụrụ iche na-abụghị Christian Christian na Buddhist Korea obodo, Won Buddhist nwere okwu ozo o gha agha ilebara anya. Ọ na-ezube ịghọ okpukpe zuru ụwa ọnụ, ndị na-abụghị ndị Korea na-arụ ọrụ gbasaa n'ụwa nile. Otú ọ dị, uwe ndị ụkọchukwu nwanyị na-eyi (na ọtụtụ ndị ozi ala ọzọ Buddha bụ ụmụ nwanyị) bụ nke Korea nke ọma ma bụrụ ihe ijuanya na onye ụkọchukwu nwanyị na-abụghị onye Korea. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ozizi bụ isi nke okpukpe Buddha a ma ama, dị ka ịlọ ụwa, na-esiri ndị na-ebulighị omenala Asia ike ịnakwere.
N'agbanyeghị nsogbu ndị a niile, Buddha a nọgidere na-akwanyere ùgwù nke okpukpe ọhụrụ nke South Korea, naanị otu n'ime okpukpe ọhụrụ akpọrọ n'afọ ndị na-adịbeghị anya iji duzie olili ozu obodo maka ndị isi oche nke Republic of Korea na naanị okpukpe ọhụrụ nke na-emechi anya zipụ ndị ụkọchukwu nye ndị agha South Korea. A na-ahụkarị ya n'akụkụ Buddha, Protestant Christianity, na Roman Katọlik dị ka otu n'ime okpukpe anọ kachasị ahazi na South Korea taa. N'agbanyeghị na ọ bụ naanị 100 afọ, Won Buddhist abịala.
Image # 1: Foto nke ebe amụrụ nke Sot'aesan Park Chungbin.
Image # 2: Foto nke Sot'aesan Park Chungbin, onye guzobere Won Buddhist.
Image # 3: Foto nke ihe osise nke mkpịsị aka aka itoolu na-ejide Ilwonsang (isi nke anya mmụọ nke ndị Buddhist Won), na-egosipụta ndị na-eso ụzọ itoolu nke Sot'aesan bụ ndị guzobere ntọala mbụ nke okpukpe ya.
Image # 4: Foto nke Ilwonsang, okirikiri nke na-anọchite anya Buddha Dharmakāya, nke a na-elekwasị anya na ofufe Buddha a ma ama.
Foto # 5: Foto nke Buddhist a ma ama na-akpọ isiala nye Ilwonsang. Rịba ama foto Sotesan n'aka nri nke ebe ịchụàjà.
Foto # 6: Ngosipụta ihe ngosi dị na peeji nke nkuzi Buddha bụ isi.
Foto # 7: Foto nke stupa wuru na Won Buddhist n'isi ụlọ ọrụ dị ka ihe ncheta nke Sot'aesan.
Image # 8: Foto nke a na-ahụkarị Buda Buddhist Sunday service.
Image # 9: Foto nke Buddhist na-atụgharị uche maka ndị ụkọchukwu.
Foto # 10: Foto nke nnukwu ụlọ ofufe na ụlọ nsọ Buddha ọhụrụ Won na ndịda Seoul.
Adams, Daniel J. 2009. "Ha meriri okpukpe Buddha na Korea: Otu Okpukpe Ọhụrụ Na-abịa Afọ." Ọrụ nke Royal Asiatic Society, Korea Alaka 84: 1-35.
Choi, Joon-sik. 2011.Buddha-Buddha: Ọmụmụ nke Buddha Buddha. Paju, Korea: Jimoondang.
Chung, Bong-kil. 2012. Dharma Master Chongsan nke Won Buddha: Analects na edemede. Albany, New York: Mahadum Ọchịchị nke New York.
Chung, Bong-kilx. 1987. "Echiche nke Dharmakaya na Won Buddha: Metaphysical and Religious Dimensions." Akwụkwọ akụkọ Korea 27: 4-15
Chung, Bong-kil. 1984. “Gini bu Buddhist a ma ama?” Akwụkwọ akụkọ Korea 24: 8-31.
Chwasan (Kwang-jung Lee). 1997. Nkọwa banyere usoro nke ntụgharị uche na Chungjeon. Klọ ọrụ na-ekwusara WonKwang.
Kọmitii maka Akwụkwọ ikike edere Akwụkwọ Nsọ nke Won-Buddhist, ed. 2016. Akwụkwọ Ozizi nke Buddha-Buddha. Iksan: Ngalaba nke International Affairs, Isi ụlọ ọrụ nke Buddha a ma ama.
Cozin, Mak. 1987. "Won Buddhist: Mmalite na Uto nke Okpukpe New Korea." Pp. 171-84 na Okpukpe na Ritual na Korea Society, nke Laurel Kendall na Griffin Dix dere. Berkeley: oflọ akwụkwọ nke Asia Studies. Berkeley: Mahadum California Press.
Ngalaba International Affairs nke Won Buddhist, editọ. 2003. Ukwe nke Buddha Buddha. Iksan, Korea: Klọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ nke WonKwang.
Ngalaba nke International Affairs nke Won Buddhist. 2006. Ntuziaka na Mmesapụ aka na Ememe. Nweta site na http://www.wonbuddhism.org/docs/5.the.wonbuddhist.scriptures/2.Won.Buddhist.Propriety.pdf na 12 June 2016.
Ngalaba nke International Affairs nke Won Buddhist. 2010. Akụkọ banyere Buddha Buddha. Nweta site na href = ”http://www.wonbuddhism.org/docs/5.the.wonbuddhist.scriptures/1.History.of.Won.Buddhism.pdf” na 1 Jenụwarị 2012.
Kim, Bokin. 2000. Nchegbu na Okwu na Buddha Buda. Philadelphia: Na-ebi akwụkwọ.
Korea: Ministri nke Egwuregwu, Omenala na njem. 2012. Han'guk ŭi chonggyo hyŏnhwang [Ọnọdụ okpukpe na Korea taa].
Ogige, Kwangsoo. 1997. Okpukpe Buddha (Wŏnbulgyo) nke Sot'aesan: Otu Okpukpe nke narị afọ nke iri abụọ na Korea. San Francisco: Ndị Ọkà Mmụta Mba Nile Pịa.
Ch'a Oksung Chŭngsan'gyo. 2003. Wŏnbulgyo: Han'gugin ŭi chonggyo kyŏnghŏm [Chŭngsan'gyo na Wŏnbulgyo: Ahụmahụ Okpukpe nke ndị Korea]. Seoul: Seokwangsa.
Chong, Igodo Ray. 1997. Ndi Buddha: A History and theology of Korea's New Religion. Lewiston, NY: Edwin Mellen Pịa.
Akwụkwọ Nsọ nke Buddha-Buddha. 2006. Iksan, Korea: Wonkwang Publishing.
Akwụkwọ Ozizi nke Buddha-Buddha. 2016. Iksan: Ngalaba nke International Affairs, Isi ụlọ ọrụ nke Buddha a ma ama.
Chung, Bong-kil. 2003. Akwụkwọ Nsọ nke Won Buddhism: Ntughari nke Wŏnbulgyo Kyojŏn na Okwu Mmalite. Honolulu: Mahadum nke Hawaii Press.
Chung, Bong-kil. 2003. "Won Buddhist: The Historical Context of Sot'aesan's Reformation of Buddhism for the Modern World." Pp; 143-67 na Buddhism n'ime uwa nke oge a, nke Steven Heine na Charles S. Prebish dere. New York: Mahadum Oxford University.
Chung, Bong-kil. 1994. Ndi Buddha: Okwu Mmalite nke Buddha Buda. Iri, Korea: Ndi Buddha Press.
Chung, Bong-kil. 1988. "Won Buddhist: A Synthesis of The Moral Systems of Confucianism and Buddhism." Akwụkwọ nke Philosophy Chinese 15: 425-48.
Chngng Ŭngch'ŏl, Kyŏngsan. 2011. Nnwere onwe pụọ na Karma na-emebi iwu. Seoul: Nhọrọ Seoul.
Chngng Ŭngch'ŏl, Kyŏngsan. 2011. Ọnwa nke Uche na-ebili na oghere efu. Seoul: Nhọrọ Seoul.
Isi ụlọ ọrụ nke Wonbulgyo, nchịkọta akụkọ. 2002. Wonbulgyo chŏnsŏ [Nchịkọta zuru ezu nke Ọrụ Buda Buddha]. Iksan, Korea: Wonbulgyo Mbipụta.
Heine, Steven na Charles S. Prebish, ndị editọ. 2003. Buddha na ụwa nke oge a: Mmegharị nke ọdịnala oge ochie. New York: Oxford University Press.
Kim, Dogong. 2010. "Njikọ dị n'etiti Buddha na okpukpe Buddha ha meriri." Akwụkwọ nke Korean Academy of New Religions, Special mbipụta, August 2010: 166-98.
Kim Tae-gŏ, Taesan. 2014. [Daesan] Ihe ndị dị mkpa nke Nzụlite Onwe Onye. Seoul: Nhọrọ Seoul.
Kim Tae-gŏ, Taesan. 2005. "Ọ dị mkpa ka e guzobe United okpukpe," Buda Buddha: Nnyocha nke Buddha-Nyocha 1: 18-21.
Lee Kwang-jung (Yi Kwangjŏng), Chwasan. 2014. Nkọwa banyere usoro nke ntụgharị uche na Chungjeon. Iksan, Korea: Wonkwang Publishing.
McCormick, Ryuei Michael. 1997. "Ihe Anọ Dị na Sot'aesan na Nichren." Ndi Buddha mụrụ II. Nweta site na http://nichirenscoffeehouse.net/Ryuei/4Graces.html na 14 June 2011.
Ogige, Jin. 2014. “Ha meriri okpukpe Buddha, Iso Christianityzọ Kraịst, na Nkwurịta Okwu Banyere Okpukpe” Akwụkwọ akụkọ okpukpe Korea 5: 109-31.
Ogige, Jin. 2006. "The Buddha Buddha Omume nke Buddha-Nature." Pp. 476-86 n'ime Okpukpe nke Korea na Omume, nke Robert E. Buswell, Jr. Princeton deziri: Princeton University Press.
Ogige, Kwangsoo. 2003. "Akwụkwọ Sot'aesan na Ndozigharị nke Buddha Buddha." Akwụkwọ bụ International Journal of Buddhist Thought and Culture 3: 169-94.
Pye, Michael. 2003. "Ndi Buddha merie dika Okpukpe New Korea." Ọnụ ọgụgụ 49: 113-41.
Ryu, JungDo, compiler na onye nsughari. 2015. Omenala Zen na Il-Won Sŏn: Nchikota okwu Dharma nke Ven. Zinsan. Iksan, Korea: Ndi Buddha mbipụta.
Sørensen, Henrik H. 1999. "okpukpe Buddha na ike ụwa na Twentieth-Century Korea" Pp. 127-52 na Buddha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na narị afọ nke iri abụọ Asia, Onye Ian Harris dezigharịrị. London: Gaa n'ihu.
Yang, Eun-yong. 2008. "Akụkọ ihe mere eme, nkwenkwe ndị bụ isi, usoro iwu, na nhazi nke okpukpe Buddha." Pp. 73-93 n'ime Nzute: Okpukpe Ọhụrụ nke Korea na Iso Christianityzọ Kraịst, nke Kim Sunghae na James Heisig dere. Seoul: Royal Asiatic Society.
Yoon Yee-heum, Kim Sang-yil, Yook Suk-san, na Park Kwang-soo, ndị ndezi. 2005. Okpukpe Ndị Korea. Seoul, Korea: Njikọ nke Okpukpe Ọhụrụ Korea.